Myanmar Muslim Youth Association (Penang) No. 364, 3rd floor, Singai Gelugor, 11700, Pulau Penang, Malaysia Ph:04-2290771, Fax: 04-2290771, HP: 017-4170786
ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၁၃
“ဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့ကို သမ္မတက အားပေး ချီးမြှောက်နေတာ၊ ဒီလိုအဖွဲ့မှာ မပါရင် လူပုဂ္ဂိုလ်ရော အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပါ ကောင်း မကောင်းစဉ်းစားပါလို့ ကျွန်တော်တို့ကို သံအမတ်ကြီးဟောင်း ဦးလှမောင်က သူ့အိမ်မှာ အနုနည်းနဲ့ခေါ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်တယ်ပာု အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုမှ အမည်မဖေါ်လိုသူ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် မီဒီယာသို့ ပြောသည်။
ဘာသာရေး အဖွဲ့များဖြစ်သည့် အိုလမာ၊ သာသနာရေးရာ ကောင်စီ၊ “မမလ” အဖွဲ့တို့မှ တာဝန်ရှိသူများကို ယခုလ ၂၅ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် သံအမတ်ကြီးဟောင်း ဦးလှမောင်က ၄င်းနေထိုင်ရာ အိမ်သို့ခေါ်ယူကာ အထက်ပါအတိုင်း အနုနည်းဖြင့် ခြိမ်းခြောက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဒီ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့မှာ ဦးလှမောင်ပါနေလို့ကို မပါတာ၊ တခြား ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံးကိုလေးစားတယ်” ပာုလည်း အစိုးရ အသိအမှတ်ပြု ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုကို ဦးဆောင်နေသူ တစ်ဦးက ဘာသာရေးအဖွဲ့ အများစုမှ ခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောထားကို ပြောသည်။
မြန်မာ အစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးမှုများ ရပ်တန့်သွားစေရေး အတွက် နိုင်ငံတကာသို့ သံတမန်နည်းဖြင့် ဖိအားပေးရန် ဦးလှမောင်က အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများကို ခေါ်ယူကာ အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့သည့်အပြင် မွတ်စ်လင်မ်ခေါင်းဆောင် အမည်ခံ သံအမတ်ပောာင်း၏ အစီအစဉ်တွင် ပြည်တွင်းရှိ သံရုံးအသီးသီးထံသို့ သွားရောက်ကာ မြန်မာနိုင်ငံအား ဖိအားပေးနေမည် ဆိုပါက မွတ်စ်လင်မ်များ အနေပိုကျပ်မည်ပာုလည်း တန်ပြန် ဖိအားပေး ခြိမ်းခြောက်မည့် အစီ အစဉ်လည်း ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှ ရိုပာင်ဂျာများ အပါအ၀င် နိုင်ငံနေရာ အနှုံန့်အပြားမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် များအား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရိုပာင်ဂျာ မွတ်စလင်မ် တစ်သိန်းခြောက်သောင်းကျော်မှာ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး နိုင်ငံတစ်ခု၏ သုတေသန စစ်တမ်းအရ ရိုပာင်ဂျာ ၄၀၀ (လေးရာ)နီးပါး သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် မိတ္ထီလာတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ရာကျော် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည့် ဖြစ်ရပ်များ သိန်းစိန်အစိုးရ အာဏာရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖိအားပေးမှုများ များပြားလာနေသဖြင့် နိုင်ငံတကာသို့ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ရှိကြောင်း လိမ်ညာရန်အတွက် ယခင် စစ်အစိုးရနည်းတူ နိုင်ငံတော်က စီမံခိုင်းစေမှုအား အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီး ဦးလှမောင်က အားထုတ် ကြိုးပမ်းပေးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ရိုပာင်ဂျာ မွတ်စ်လင်မ်များအား အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မှုများမှသည် မြန်မာ မွတ်စ်လင်မ်များအား ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြမ်းဖက်များက မိတ္ထီလာမှ အစပြုကာ လက်ရှိတွင် နောက်ဆုံး အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် လားရှိုးမြို့အဆုံး တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးမှုများတွင် အစ္စလာမ့်ဘာသာရေး ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ဖျက်ဆီး ခံထားရကြောင်းလည်း သိရသည်။
မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်များ အပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများ ရပ်တန့်ရန်နှင့် အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ကြောင်း အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန် စသည့် နိုင်ငံများက မြန်မာအစိုးရအား တရားဝင်ပြောကြား ထားပြီးဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်အလိုကျ လှုပ်ရှားရမည့် အစိုးရ လက်ကိုင်ဒုတ် ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး အဆိုပါ အဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်အလိုကျစေမည့် ကြေညာချက်များကို အခါအားလျှော်စွာ ထုတ်ပြန်နေရသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
အစိုးရ လက်ကိုင်ဒုတ် ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတကာက ရှုံ့ချအံသြရသည့် မိတ္ထီလာမြို့ရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအား မြို့လုံးကျွတ် သတ်ဖြတ် ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုကြီးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးပြီး အဆိုပါကြေညာချက်ကြောင့် ဥက္ကံမြို့တွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအား အကြမ်းဖက်သမားများက မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်သည့်နေ့တွင် သမ္မတ၏ ဆုချီးမြင့်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် မရှိသည့် ပြယုဒ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကျရောက်ခဲ့သည့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ကုရ်ဘာနီ အီးဒ်ပွဲတော်ကို အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးများက တညီတညွတ်တည်း လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း မရှိခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်သည် ထင်ရှားသည်။
မိုးချစ်သူ(မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်မီဒီယာ C J)
Posted by Penang Myanmar Muslim Youth Helping Association at 8/01/2013 03:29:00 AM No comments:
Posted by Penang Myanmar Muslim Youth Helping Association at 7/20/2013 01:48:00 AM No comments:
ရဲရင့်သော အစ္စလာမ့် ခံတပ်တစ်ခု ဆောက်တည်ကြပါစို့
မြန်မာပြည်သူလူထုတွေ လေးစားယုံကြည်ခဲ့တဲ့ ၈၈ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် တစ်ယောက် ပီနန်မြို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လာရောက်ဟောပြောမယ်လို့ သတင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ ဟောပြောမယ့်ရက်က ဂျူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့။ ဟောပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်က “နောက်ဆုံးခံတပ်”။ ဒီခေါင်းစဉ်ကို ကြားလိုက်ပြီး ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ အတွေးတွေဝင်လာမိတယ်။
ခံတပ် (Fort) ဆိုတာ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကာကွယ်ရမယ့်၊ ရန်သူကို အသေခံတိုက်ရမယ့် နေရာ။ နောက်ဆုံးခံတပ် ဆိုတော့ ရဲရဲဝင့်ဝင့်နဲ့ အသက်ပေးကာကွယ်ရမယ့် နောက်ဆုံးနေရာ။ ဒီနေရာသာ အကယ်၍ကျဆုံးရင် အရာအားလုံး လဲပြိုဆုံးရှုံးသွားမှာ အသေအချာပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့ ကျွန်မတို့ မွတ်ဆလင်မ်တွေရဲ့ ဘ၀တွေကရော။ နိုင်ငံရဲ့ အနောက်မြောက်ဘက်မှာ နေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ၁၉၄၈ က စတင်ပြီး စစ်ဆင်ရေးတွေ၊ စီမံကိန်းတွေအဆင့်ဆင့်နဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ဖို့ စစ်အစိုးရက ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာ အခုအချိန်အထိပါပဲ။ ပြည်တွင်းက မြန်မာမွတ်ဆလင်မ်တွေကိုလည်း တစ်မြို့ပြီး တစ်မြို့မီးမြိုက်ပြီး တစ်စပြီးတစ်စ သတ်ဖြတ်ဖယ်ရှားဖို့ ကြိုးစားနေတာကိုလည်း ကမ္ဘာကအသိပါပဲ။
ဒီတော့ ကျွန်မတို့ မွတ်ဆလင်မ်တွေဟာ ရုပ်ဝတ္တုတွေ ပြာကျသွားပါစေ၊ ရင်ထဲက နှလုံးသားတွေ ရဲရဲတောက်ရှင်သန်နေရမယ်။ အပြစ်မဲ့ အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ မွတ်ဆလင်မ်တွေအတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပေမယ့် သူတို့အတွက် အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရမယ် ဆိုတဲ့အသိနဲ့ သံမဏိလို စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာနေရမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မွတ်ဆလင်မ်တွေအားလုံးရဲ့ ရဲရင့်တဲ့ နှလုံးသားတွေ၊ သံမဏိစိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ အစ္စလာမ့်နောက်ဆုံးခံတပ်ကို တည်ဆောက်ပြီး အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။ မတရားခံနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေအတွက် ရဲရင့်စွာကာကွယ်ပေးပြီး လူ့အခွင့်အရေးရအောင် ကြိုးပမ်းကြရမယ်။ ကျွန်မရေးသားနေတာတွေဟာ အကြမ်းဖက်ဖို့၊ လူသတ်ဖို့ ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ရဲရင့်ခိုင်မာဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်မ်အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးရှိစေဖို့ နဲ့ အစိုးရနဲ့ မြန်မာဘာသာရေး အစွန်းရောက်တွေကို အရှုံးမပေးဘဲ ကြံ့ကြံ့ခံတွန်းလှန်ဖို့ကို ပြောချင်တာပါ။
တစ်ချိန်ကတော့ ကျွန်မအမြင်မှာ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေဟာ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်ပြီး အုပ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်အနေနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ အစ္စလာမ် တရားမျှတမှု ခံတပ်မှာပါဝင်မယ်လို့ ထင်မိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့လည်း အချို့သောသူတွေဟာ မိုးခါးရေသောက်ရင်း အမှန်တရားကို ဥပေက္ခာပြု၊ အများအကြိုက်လိုက်ရင်း လူများတော့ ဤကို ကျွဲ ဖတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ ဒီအတွက် ဂရုစိုက်စရာ၊ ၀မ်းနည်းစရာမလိုပါဘူး။ မွတ်ဆလင်မ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ရဲရင့်တဲ့ နှလုံးသားတိုင်းဟာ အုပ်တစ်ချပ်ချင်းစီ အဖြစ်ပါဝင်ပြီး ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်တွင်းက မွတ်ဆလင်မ်တွေအားလုံးကို ကာကွယ်ပေးမယ့် ခံတပ်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်ကြပါစို့။
Posted by Penang Myanmar Muslim Youth Helping Association at 7/12/2013 11:44:00 PM No comments:
အိန္ဒိယဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်၍ မျက်ကန်းမျိုးချစ်နဲ့ မျိုးမချစ်တဲ့ မျက်ကန်းတွေအကြောင်း ဗောဓိတစ်ထောင်ဆရာတော် ပြောပြီ
Monday, July 8, 2013 | မျက်ဝန်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘီဟားပြည်နယ်ရှိ ဗုဒ္ဓဂယာတွင် ယမန်နေ့ကပေါက်ကွဲမှုအချို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူလေးဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး အပျက်အစီးအချို့လည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုဗုံးကွဲပျက်စီးမှုများအပေါ် အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် မန်မူဟန်ဆင်းက ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စလ်မာန်းခူရ်ရှီးဒ် (Salman Khurshid) ကလည်း ဒီဗုံးတွေဟာ ဘယ်သူတွေလက်ထဲကထွက်တယ်ဆိုတာကို တိကျတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ မရမချင်း တစုံတရာ မှတ်ချက်ပေးလို့ရမှာ မဟုတ်သေးတဲ့အကြောင်း၊ အမြန်ဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ခိုင်မာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေ ရရှိလာတဲ့အခါ ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက် အိန္ဒိယ အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေး အေဂျင်စီ (NIA) ကိုလည်း အမြန်ဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့အတွက်လည်း မေတ္တာရပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အများပြည်သူ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သတဲ့ ဘာသာရေးနယ်မြေမှာ အခုလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အတွက် အတော်လေးကို ၀မ်းနည်းမိကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက် ရာဂျစ္စတန် (Rajastahn) ပြည်နယ်၊ ဂျိုင်ပူးရ် (Jaipur) မြို့တော်မှာ မီဒီယာများနဲ့တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဒီပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ထုတ်ပြန်ဖို့ စောနေသေးကြောင်း ပြောနေဆဲမှာပဲ အိန္ဒိယအတိုက်အခံပါတီတချို့နဲ့ ရဲဌာနအကြီးအကဲတချို့ကတော့ ဒါဟာ မကြာသေးခင်ကမှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက လူနည်းစု မွတ်စလင်မ်များအပေါ် အကြမ်းဖက်ခဲ့တာတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရလဒ်အကျိုးဆက်တွေဖြစ်နိုင်ကြောင်း စွတ်စွဲနေကြပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အတိုက်အခံပါတီများနဲ့ ရဲဌာနအကြီးအကဲများမှာ ဟိန္ဒူအခြေခံအမျိုးသားရေးဝါဒီများ ဖြစ်ကြပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀ကျော်ကာလအတွင်းက အင်အားကြီးပါတီများအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ထိုစဉ်က အစွန်းရောက်ဟိန္ဒူများအား သွေးထိုးပေးကာ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီသက်တမ်းရှိတဲ့ ဗလီများအား လိုက်လံဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် မွတ်စလင်မ်များအား လိုက်လံ သတ်ဖြတ်မှုများအား ယင်းပါတီနှင့်ရဲဌာနများမှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်များ၏ စုံစမ်းမှုရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း အတိုက်အခံပါတီများရဲ့ကဏ္ဍဟာ မှေးမှိန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုအား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖေ့စ်ဘွက်သည့် အစွန်းရောက် ဘာသာရေး လှုံ့ဆော်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့ကတော့ အဆိုပါက အတိုက်အခံပါတီများ၏ ဝေဖန်စွတ်စွဲချက်များအား အခြေခံ၍ ပြည်တွင်းရှိ မွတ်စလင်မ်များအား ထပ်မံ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရန် လှုံ့ဆော်နေသည့်အပေါ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂယာမှာ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ အသျှင်ကုမုဒ (Ashin Kumuda Bawdhitahtaung) က အကြမ်းဖက်မှုများ တကျော့ပြန် ပေါ်ပေါက်လာမည်ကို စိုးရိမ်၍ ၎င်းရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာပေါ်ကတဆင့် သတိပေး ဖော်ပြချက်တွေကို တစ်နေကုန်နီးပါး ထုတ်ပြန်ပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
"ယနေ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဂယာ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဦးဇင်းတို့ ဗုဒ္ဓဂယာဒေသရှိ မြန်မာရဟန်တော်များမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများကို အထူးမေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ ဗုံးဒဏ်ခံစားရသည့် ဦးဝိလာသဂ္ဂ၏ အခြေနေ ကောင်းမွန် လျက်ရှိပါတယ်။" လို့ အဆိုပါဘုန်းတော်ကြီးမှ ဖော်ပြထားပြီး ယခုကိစ္စမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဟန်းတော်များကို သီးခြားပစ်မှတ်ထား၍ တိုက်ခိုက်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း ယခုလို ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။
၂၀၁၂ နှစ် ကုန်ခါနီးကထဲက အိန္ဒိယအစိုးရမှ ဗုဒ္ဓဂယာကို အကြမ်းဖက်မည့် သတင်းများရရှိသည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ဘူးခြင်း။
ဗုံးဖောက်ခွဲမှုအပြီး အခြားနေရာဒေသတွင် တွေ့ရှိသော ဗုံးများမှာ...
- တိဘက်ကျောင်တွင် ၁ လုံး ပေါက်ကွဲ ၂ လုံး မကွဲသေးဘဲ တွေ့ရှိခြင်း၊
- ထိုင်းကျောင်းးတွင်း မပေါက်ကွဲသေးသော ၁ လုံး တွေ့ရှိခြင်း၊
- ဂျပန်ကမာကုရ ထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော် ပလ္လင်တော်ကြားကလာပ်တွင် မပေါက်ကွဲသေးသော ဗုံး ၁ လုံး တွေ့ရှိပြီး
ယခုကိစ္စကို မည်သည့်အဖွဲ့.. မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဟု အိန္ဒိယအစိုးရမှ မထုတ်ပြန်သေးဘဲ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဟုသာ ထုတ်ပြန်ထားခြင်း
အထက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြထားပြီးနောက် ဤကိစ္စကို အကြောင်းပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်မလာစေဖို့ ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါကြောင်းဆိုပြီး မေတ္တာရပ်ခံထားပါသေးတယ်။
အထက်ပါအတိုင်း အသိပေးနေပေမယ့် အစွန်းရောက် ဘာသာရေး လှုံ့ဆော်သူ စစ်သွေးကြွ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့ရဲ့ မဟုတ်မမှန်ချဲ့ကားမှုတွေအပေါ်မှာလည်း အဆိုပါ ဘုန်းတော်ကြီးက ယခုလို အသိပေးထားပါသေးတယ်။
"ယနေ့ဗုဒ္ဓဂယာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍
ဗုဒ္ဓဂယာအနီးတွင် နေထိုင်သော မြန်မာကျောင်းသား ရဟန်းတော်များအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ဗုံးဒဏ်ခံခဲ့ရသော မြန်မာရဟန်းတော် ဦးဝိလာသဂ္ဂ၏ အတူနေ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်၊ မြန်မာပြည်သူများ၏ အကျိုးကို တတ်နိုင်သမျှ စောင်ရွက်လိုသူဖြစ်သည်နှင့်အညီ မြန်မာပြည်အတွင်း၌ မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားမလာစေရန် မိမိသိရှိသမျှ သတင်းအမှန်တွေကို တစ်နေကုန်နီးပါး ဖြန့် ဝေခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က သတင်းဌာနတွေ မေးသမျှကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး သတင်းတိကျအောင် ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာပဲ အင်တာနက်သတင်း၊ အထူးသဖြင့် Facebook သတင်းများတွင် ပြဿနာ ပိုမိုကြီးထွားစေရန် တစ်ဖက်ကို လိုသလို စောင်းပေးသည့်သတင်းများနှင့် ဆဲဆိုသည့် ကွန်မန့်များကို စိတ်မကောင်းဘွယ်ရာ ဖတ်ရှုရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အမှန်တကယ် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးကို လိုလားသူမှန်လျင် ယထာဘူတကျသော ဤအယူအဆ အတွေးခေါ်လေးနှင့်အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်ကြစေလိုကြောင်း မေတ္တာရပ်ခံ တင်ပြအပ်ပါတယ်" လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆက်လက်၍လည်း "မျိုးမချစ်တဲ့ မျက်ကန်းတွေကြောင့် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးသိက္ခာ ကျစေနိုင်သလို မျက်ကန်း မျိုးချစ်တွေကြောင့်လည်း တိုင်းပြည်ပြည်နှင့်လူမျိုး အဖတ်ဆယ်မရအောင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်အရာမဆို မိမိတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ယနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့ ခေတ်အခြေနေ၊ စနစ်အခြေအနေတွေနှင့် မျက်မှောက်ကမ္ဘာကြီး၏ ပကတိအခြေနေမှန်များကို ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ သုံးသပ်ပြီး မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း မဇ္ဈိမပဋိပဒါလမ်းစဉ်အတိုင်း ကျင်းသုံးနေထိုင်ခြင်းကသာ မိမိနှင့် မိမိတိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု စဉ်းစားသုံးသပ်မိပါကြောင်း" ဟူ၍ မျက်ကန်းမျိုးချစ်နဲ့ မျိုးမချစ်မျက်ကန်းတွေအကြောင်းကိုလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ ဆရာတော် အသျှင် ကုမုဒ (ဗောဓိတစ်ထောင်) က ဝေဖန်သုံးသပ်တင်ပြသွားပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အကြီးတန်းဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ နတစ်ရ်ှကူမာ (Nitish Kumar) ကလည်း ဗောဓိကျောင်းတော်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်လာရခြင်းမှာ လုံခြုံရေးပေါ့လျော့မှုကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ထင်ကြေးပေး ပြောဆိုနေသည့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချလိုက်ပြီး လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာအထူးအာဏာအား အထူးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ (CISF) ကသာ ရယူရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ယခုအခါတွင် ယင်းကျောင်းတော်တ၀ိုက်ရှိနေသူများအား အိတ်သွန်ဖာမှောက် ပိုက်ဆိပ်တိုက်ကာ စစ်ဆေးစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်လို့ ဒေသမှာရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာတစ်ဦးကလည်း သတင်းပေးပို့လာပါတယ်။
(အပေါ်ပုံ) အိန္ဒိယဂယာဒေသရှိ ပေါက်ကွဲပျက်စီးမှုတချို့နှင့် စောင့်ကြပ်နေသည့် အိန္ဒိယလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအချို့ (ဓာတ်ပုံ-AP/AFP-MMM)
(အောက်ပုံ) သတင်းမှန်တင်ပြပြီး၊ မလိုလားအပ်တာတွေမဖြစ်အောင်ပြောဆိုသော ဆရာတော် (ဓာတ်ပုံ-Ashin Kumuda Bawdhitahtaung-ဧရာဝတီ)
Posted by Penang Myanmar Muslim Youth Helping Association at 7/08/2013 03:35:00 PM No comments:
ဖခင်အရင်းဖြစ်သူမှ သမီးနှစ်ဦးအား သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်
ဖခင်အရင်းဖြစ်သူမှ သမီးနှစ်ဦးအား သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မန်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
မန္တလေးမြို့၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ အုန်းချောကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီး မှုဖြစ်စဉ်မှာပြီးခဲ့သောဇွန်လဆန်းပိုင်းက မ--------(၁၆)နှစ်နှင့်ညီမဖြစ်သူ မ-----တို့နှစ်ဦး နေအိမ်အပေါ်ထပ် တွင်အိပ်နေစဉ် ဖခင်အရင်းဖြစ်သူဦး---မှ မ----၏ပခုံးအား လှုပ်နှိုးပြီး မအော်နှင့် အော်လျှင်သတ်ပစ်မည်ဟု ချိန်းခြောက်ပြောဆိုကာ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊ အမဖြစ်သူနှင့် ယောင်းမတော်သူတို့အားပြောပြရာ အစ်မဖြစ်သူမှာလည်း ဖခင်ဖြစ်သူဦး-----က လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ခန့်က သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခံခဲ့ရဘူးကြောင်း ဖခင်ဖြစ်သူအား ကြောက်၍ မည်သူမှ မပြောပြခဲ့ကြောင်း၊သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခံရစဉ် ၀တ်ဆင်ခဲ့သည့် ထဘီနှင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီအား သိမ်းဆည်းထားပြီး မုံရွာမြို့တွင်နေထိုင်သူ ဦးလေးထံ ညီမနှစ်ဦးမှ ဖြစ်စဉ်အား ပြောပြရ်ျ ဦးလေးဖြစ်သူမှ မကျေနပ်၍ သားမယားပြုကျင့်ခံရသူ မ---မှ တရားလိုပြုလုပ်ကာ ယခုလ ၃ရက်နေ့တွင် တိုင်တန်းခဲ့ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းများမှသိရသည်။
၄င်းအမှုအား တရာလိုနှင့်သက်သေထွက်ဆိုချက်များအရ တရားခံမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ပေါ်ပေါက် သဖြင့် အုန်းချောရဲစခန်းမှ (ပ)၈၃/၂၀၁၃ ပုဒ်မ ၃၇၆ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ထားကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
Posted by Penang Myanmar Muslim Youth Helping Association at 7/07/2013 01:22:00 AM No comments:
(http://www.myatshu.com မှ မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လတ်တလော ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေအရ ဦးဝီရသူကို ဖမ်းလိုက်ရင် မုန်းတီးရေးတရားတွေ ကွယ်သွားမလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ မကွယ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာ အခု ဖြစ်နေတဲ့ မွတ်စလင်မုန်းတီးရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြယုဂ်တစ်ခုသာလျှင်ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒီပြယုဂ်ကို အမှီပြုပြီး နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တွေကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။
ဖြစ်တတ်တာကတော့ ပြယုဂ်တစ်ခုရဲ့ နာမည် အရမ်းတက်လာပြီဆိုရင် အဲဒီ ပြယုဂ် ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြဿနာရဲ့ အတိမ်အနက်၊ ဇာစ်မြစ် စတာတွေဟာ ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းနည်းကို စဉ်းစားရာမှာလည်း အဲဒီ အရင်းခံအကြောင်းတွေကို ဖယ်ဖို့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီကြားထဲ နာမည်ယူချင်တဲ့ သူတွေ ကလည်း ဒီပြယုဂ်ကိုသုံးပြီး နာမည်ယူသွားနိုင်ပါသေးတယ်။
ဦးဝီရသူဟာ သူကိုယ်တိုင် ဒီအမုန်းတရားတွေကို နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်လို့ဆိုတာ ငြင်းစရာ မရှိပါဘူး။ အခုအင်တာနက်မှာ ပြန့်နေတဲ့ သူထောင်မကျခင်က ဘုန်းကြီးတွေကို ဟောတဲ့ ကုလားတွေကို နေစရာမရှိအောင် လုပ်မယ်ဆိုတာကို ကြည့်ရင်၊ လာသမျှ နိုင်ငံတကာက သတင်းထောက်တွေကို မြန်မာဘင်လာဒင် ဆိုပြီး ၀ံ့ကြွားစွာပြောနေတာကို ကြည့်ရင်၊ ရှိသမျှအားအင် ကုန်ပစေ ခန်းပစေဆိုပြီး တပြည်လုံး အမုန်းမီး ဟုန်းဟုန်းတောက်အောင် လိုက်ပြောနေတာကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ မုန်းတီးရေး သရဏံ ဂစ္ဆာမိ လုပ်နေတာ အခုဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးလည်း သိနေပါပြီ။
ဦးဝီရသူကို ပြယုဂ်အဖြစ် တင်ပေးလိုက်တဲ အဓိက အကြောင်းကတော့ ခေတ်အဆက်ဆက် ဘာသာ ရေးနှင့် လူမျိုးရေးနှိပ်ကွပ်မှုသမိုင်းအမွေဆိုးကို ဆက်ပြီး လက်ခံကာ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ စစ်တပ်အခြေပြု အာဏာရ အစိုးရအဖွဲ့ ကြီးပါပဲ။
“ထွက်လမ်းကတော့ ဆန့်ကျင်ပါ။ မတရားမှုကို ဆန့်ကျင်ပါ။ လူအချင်းချင်း အားသာလို့ ဗိုလ်ကျမှုကို ဆန့်ကျင်ပါ။ မုန်းတီးရေးတရားဟောသူတွေဟာ ဘာအ၀တ်ပဲ ၀တ်ထားဝတ်ထား သူတို့ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ပြလိုက်ပါ။ မတရားတဲ့ ၂၀၀၈ ဥပဒေကြီးကို ဆန့်ကျင်ပါ။ ပြယုဂ်ကိုလည်း ဆန့်ကျင်ပါ။ မတရားမှုကို ကြိုးကိုင်ထားသူတွေ၊ နောက်က လက်တွေ စနစ်တွေ ပြိုကျတဲ့အထိကို ရှုတ်ချပြီး ဆန့်ကျင်ပြလိုက်ပါ။”
စစ်တပိုင်းအစိုးရက ဦးဝီရသူကို လွှတ်ပေးထားတာကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သူတို့ထဲက ဦးအောင်သောင်းလို လူတယောက်နဲ့ ပတ်သက်နေလို့၊ ဦးခင်ညွန့်လိုလူတယောက်နဲ့ ပတ်သက်နေလို့ ပြောချင်ရင်လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။ မပတ်သက်လည်း သူတို့က လွှတ်ထားမှာပါပဲ။ ဒီအစိုးရဟာ စစ်တပ်အစိုးရ၊ တစ်နည်းပြောရင် လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေကို လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက ချေးခါးအူမပါမကျန် ဘယ်လို ဖန်တီးရမယ် ဘယ်လိုဖြန့်ရမယ် ဆိုတာကို နောကြေနေအောင်သိနေတဲ့အစိုးရဆိုတာ မမေ့ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုအဓိကရုဏ်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကို လွယ်ကူစေတယ်ဆိုတာ အမေမွေးကတည်းက သိတဲ့လူတွေလို့ကို ဆိုနိုင်ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ လွယ်ကူစေသလဲ။
အာဏာလက်ကိုင်အုပ်ချုပ်သူတွေဟာ ဒီမိုကရေစီရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံများမှာတောင် အအုပ်ချုပ်ခံသူတွေကို တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ထိန်းရပါတယ်။ ထိန်းတဲ့နည်းထဲမှာ အလွယ်ဆုံးကတော့ လူတွေကို တခုခုကို ကြောက်နေအောင် အမြဲလုပ်ထားရတာပါပဲ။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆို သမ္မတ အဆက်ဆက်ရဲ့ လူတွေကိုကြောက်နေစေတဲ့ အရာတွေကတော့ အသားအရောင်မတူတဲ့သူတွေ၊ ကွန်မြူနစ်တွေနဲ့ မွတ်စလင် အကြမ်းဖက်သမားတွေပါပဲ။ အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာတော့ အဲဒီကြောက်စရာတစ်ခုခုဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ အာဏာရှင်အစိုးရတွေကို ကြောက်နေရတဲ့ အဆင့်ကို ကျော်သွားရင် ပြန်ကန် ပေါက်ကွဲထွက်တတ်ပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကိုပြန်ကြည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အခြားကြောက်စရာကောင်းတာ တစ်ခုခုကို ဖန်တီးပြပြီး အအုပ်ချုပ်ခံ လူတွေကို အာရုံလွှဲရပါတယ်။ လူအများစုကို အာရုံလွှဲရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လူတွေကြားထဲ လူအများနဲ့ မတူတဲ့အရာတွေကို ကြေက်စရာ ဒါမှမဟုတ် နှိမ်စရာအဖြစ် လက်ညှိုးထိုးပြရပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးက အသားအရောင်ပါ။ အသားအရောင် မတူရင် ရန်သူလြို့မင်အောင် အမျိုးမျိုး လှိမ့်လီဆယ် ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက လူတန်းစားပါ။ ဆင်းရဲရင် မဟုတ်တာလုပ်မယ်ဆိုပြီး သိမ်းသွင်းထားရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံသားဖြစ်တာမဖြစ်တာပါ။ နောက်တစ်ခုက လူမျိုးပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဘာသာရေးပါ။ နောက်တစ်ခုက ကျား၊ မခွဲခြားသတ်မှတ်မှုအပေါ် အမြတ်ထုတ်တာပါ။
အမေရိကန်နဲ့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ သမိုင်းတွေဟာ အသားအရောင်ခွဲခြားအုပ်ချုပ်မှုရဲ့ သမိုင်းတွေပါ။ လူမျိုးရေးနဲ့ ခွဲခြားအုပ်ချုပ်မှုရဲ့ သမိုင်းသက်သေကတော့ ဂျူးသန်းပေါင်းများစွာကို သတ်စေခဲ့တဲ့ ဟစ်တလာခေတ် ဂျာမန်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးပါပဲ။ ဘာသာရေးနှင့် နှိပ်ကွပ်မှုကတော့ ဥရောပသမိုင်းတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုလိုနီခေတ်၊ ပါလီမန်ခေတ်၊ စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက် ခေတ်သမိုင်းတွေပါပဲ။ ယနေ့ခေတ်မှာလည်း သတင်းတွေ နားထောင်ကြည့်ရင် ကြားနေရဆဲပါပဲ။ လူတန်းစားနဲ့ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံသား၊ ကျား၊ မ ခွဲ တာတွေကတော့ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေရော မတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာရော၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေရော၊ အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာပါ တွေ့ရတဲ့ ယနေ့ခေတ်ပြိုင်မှတ်တမ်းတွေလို့ပြောလို့ ရပါတယ်။
ဒီလို အုပ်ချုပ်သူတွေက သူတို့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေကို အချင်းချင်းခွဲမြင်စေဖို့ လီဆယ်တဲ့ အရာတွေဟာ လူများစု ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် လူများစုကို အားသာစေတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ (ဥပမာ နိုင်ငံသား ဖြစ်တာမဖြစ်တာမှာ အများစုဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ ဒီအကြောင်းနဲ့ ရန်တိုက်ရင် ဘယ်သူတွေ ကိုယ့်ဘက်ပါမယ်ဆိုတာ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရတိုင်း သိပါတယ်။) ဒါမှလည်း လူအများစုက အုပ်ချုပ်သူရဲ့  အာဏာလက်ကိုင်တုတ်ကို ပြန်မချိုးဘဲ လူနည်းစုကိုသာ ချိုးမှာမို့ ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ကြည့်ရအောင်။ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ မဖြစ်ခင် တောင်ကြီးမှာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး အာရုံလွှဲဖို့ ဦးနေ၀င်း အစိုးရကြိုးစားတာ သက်သေတစ်ခုပါ။ အဲဒီတုန်းက သူ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ အခု လက်ရှိ စစ်တပိုင်း အစိုးရကတော့ ဒီကိစ္စမှာ အောင်မြင်မှု သရဖူတစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆောင်းနေပါပြီ။ ဦးဝီရသူကို တစ်ဆင့်ခံ သုံးဖို့ (သိသိချည်းနဲ့ လွှတ်ထားပေးတာလည်း သုံး နည်းတစ်ခုပါပဲ။) အကြံ အောင်မြင်သွားတယ်လို့ ပြောလို့ရပါပြီ။
နောက်ထပ် စစ်တစ်ပိုင်းအစိုးရ ရသွားတဲ့ အမြတ်တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ အခု နိုင်ငံတကာ စာနယ်ဇင်းတွေမှာ ဦးဝီရသူ အကြောင်းပြောရင် အမြဲပါပါလာတတ်တဲ့ အခုလို သူပြောချင်သလို ပြောလို့ရတာ နှစ်များစွာ ပိတ်ထားတာကို ဖွင့်ပေးလိုက်လို့၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရသွားလို့ စသဖြင့်ပါ။ ဒါကိုကြည့်ရင် ဟုတ်သလိုလို ရှိတတ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ခွဲခြားစေတဲ့ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေကို စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရပိုင် စာနယ်ဇင်းတွေ မြန်မာ့အသံကနေ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် လုပ်ခဲ့တာ သတင်းစာတွေ ပြန်ဖတ်ရင် တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အခုကတော့ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုကို နိုင်ငံတော်ပိုင်ကနေ ဦးဝီရသူကို ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်နဲ့အညီ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေးလိုက်တာပါ။ (အခြား စာနယ်ဇင်းတွေကိုလည်း ဒီကိစ္စအတွက် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပေးလိုက် ပြီးပါပြီ။ အလဲဗင်းတို့ ဗွိုက်တို့ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။) ၂၀၀၃ မှာ ဘာလို့ ဦးဝီရသူကိုဖမ်းခဲ့သလဲ။ သူပြောတာကို မကြိုက်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပါ။ NLD နဲ့အတိုက်အခံကို အပြတ်ချေမယ်ဆိုပြီး သူ့ ကို ၀င်မရှုပ်အောင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောင် လိုမှသုံးဖို့ဆိုပြီး ထောင်ထဲမှာ ဥ ထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။
ဦးဝီရသူကို မဖမ်းပဲထားလို့ အခု လက်ရှိ အစိုးရ ရမယ့် နောက်ထပ်အမြတ်တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ ကြာကြာလွှတ်ထားပြီးမှ ဖမ်းပြလိုက်ပြီး အသားလွတ် နာမည်ဝင်ယူနိုင်တဲ့အမြတ်ပါ။ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့ စီးပွားရေးကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကို တွေ့တဲ့အချိန်၊ လူတွေက ဒီရောင်းကုန်ကို စားတာသေချာသွားပြီဆိုတဲ့ အချိန်မှာဆိုရင် ဖမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ အခုလည်း အဲလိုအချိန်ရောက်နေပြီဆိုတာ ၈၈၈၈ က ကိုကိုကြီးရဲ့ အမျိုးသားရေး စကားတွေ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် သတင်းစာတွေရဲ့ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ခွဲခြားနှိပ်ကွပ်တဲ့စကားတွေက ပြနေပါပြီ။
နောက် အမြတ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အခုကာလကို တကယ့် ဒီမိုကရေစီလို့ ထင်နေသူတွေအတွက် ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လူတွေ သတ်ဖြတ်နေတာပါလို့ ထင်သွားစေပြီး စစ်တပ်က အချိန်မရွေး ပြန်ရှေ့ထွက်နိုင် ဘောင်းဘီပြန်ဝတ်နိုင်တဲ့ အခွင့်ပါ။ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို ဖျက်လိုက်လည်း သူတို့အတွက် အရှုံးမရှိပါဘူး။ အကုန်အငြိမ်းစားပေး၊ နောင်စစ်မျိုးဆက်က အဆင်သင့်ပါ။ အခု လွှတ်တော်တက်နေတဲ့ စစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဟာ နောင်တစ်ခေတ်ရဲ့စစ်သည်များပါပဲ။ အခြေခံဥပဒေကို မဖျက်ဘဲ အာဏာသိမ်းနိုင်ပါတယ်။ (အမှန်တော့ အခုကာလဟာ စစ်တပ်က အစစပြင်ဆင်ပြီးမှ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတစ်မျိုးပါပဲ။)
နောက် တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ စစ်တပ်နဲ့ အတူ အာဏာရော သြဇာပါရှိတဲ့အဖွဲ့ အစည်းဆိုလို သံဃာ့ အဖွဲ့ အစည်းပဲရှိပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ခံလူတွေက သမိုင်းကို မေ့ပေမယ့် စစ်တပ်က မမေ့ပါဘူး။ ၂၀၀၇ မှာ သူတို့ကို သံဃာတွေက အားစမ်းတာကို မကျေပါဘူး။ ဦးဝီရသူကြောင့် သံဃာ့အဖွဲ့ အစည်း အခု နာမည်ပျက်နေပါပြီ။ဒါကိုတော့ စစ်တပိုင်းအစိုးရရဲ့ နောက်ကြောင်းပြန် လက်စားချေမှုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
စစ်တပိုင်း အစိုးရရဲ့ အမြတ်တိုင်းဟာ ပြည်သူပြည်သား လူများစုရော လူနည်းစုတွေအတွက်ပါ ဘယ်အချိန်မဆို အရှုံးချည်းပါပဲ။ ဘာတွေရှုံးသလဲ။ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ခွဲခြားနှိပ်ကွပ်လိုစိတ်ကို လက်ခံအားပေးလိုက်တာနဲ့ ပထမဆုံး အရှုံးကတော့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ မြင့်မြတ်မှုနဲ့ လဲပေးလိုက်ရတဲ့ မုန်းတီးရေးတရားတွေကို ရင်ထဲ အသည်းထဲ သိုလှောင်မိတဲ့ အရှုံးပါပဲ။ လူများစုတွေအတွက်ကတော့ ဒီမုန်းတီးရေးဥာဉ်ကြောင့် ဘယ်လူနည်းစုကိုမဆို မုန်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေခြင်းဟာလည်း ကိုယ့်အနာဂတ်ကိုပါ ရောင်းထားတဲ့ အရှုံးပါပဲ။ နောက်ဆုံး အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး မတရားမှုတွေကို မမြင်နိုင်တော့ဘဲ လူအချင်းချင်း သတ်တဲ့ဆီထိ ရောက်ပါ့မယ်။ အခုလည်း အစပြုနေပါပြီ။
ထွက်လမ်းကတော့ ဆန့်ကျင်ပါ။ မတရားမှုကို ဆန့်ကျင်ပါ။ လူအချင်းချင်း အားသာလို့ ဗိုလ်ကျမှုကို ဆန့်ကျင်ပါ။ မုန်းတီးရေးတရားဟောသူတွေဟာ ဘာအ၀တ်ပဲ ၀တ်ထားဝတ်ထား သူတို့ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ပြလိုက်ပါ။ မတရားတဲ့၂၀၀၈ ဥပဒေကြီးကိုဆန့်ကျင်ပါ။ ပြယုဂ်ကိုလည်း ဆန့်ကျင်ပါ။ မတရားမှုကို ကြိုးကိုင်ထားသူတွေ၊ နောက်က လက်တွေ စနစ်တွေ ပြိုကျတဲ့ အထိကို ရှုံ့ချပြီး ဆန့်ကျင်ပြလိုက်ပါ။
Posted by Penang Myanmar Muslim Youth Helping Association at 7/05/2013 03:13:00 AM No comments:
အပေါ်က သူလည်းသိပ်ဥာဏ်ကြီးတယ်။ သင်္ကန်း ၀တ်ထားတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓကို သေကြောင်းကြံတယ်။
Posted by Penang Myanmar Muslim Youth Helping Association at 7/02/2013 07:41:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံပဋိပက္ခ ဒေသတွင်းရိုက်ခတ်မှာ မလေးရှား စိုးရိမ်
မူဆလင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဟာ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား စတဲ့ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေမှာလည်း ရှိနေသလို၊ တချိန်တည်းမှာ မြန်မာပြည် အတွင်းမှာလည်း အခုထက်တိုင်အောင် အခြေအနေဟာ မအေးချမ်းနိုင်သေးဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို (၄၆) ကြိမ်မြောက် ဘရူနိုင်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ အစည်းအဝေးမှာလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။ ဘာတွေ ဘယ်လို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလဲဆိုတာကို မခွာညိုက တင်ပြထားပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ ဘရူနိုင်းအစည်းအဝေးအတွင်း မလေးရှားနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို မူဆလင်တွေအပေါ် အခုထက်ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် အကာအကွယ်ပေးရေးနဲ့ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူတွေကိုလည်း ထိုက်သင့်သလို ပြစ်ဒဏ်ကျခံစေရေး စတာတွေတို တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။ အခု နောက်ဆုံး အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက် ဖြစ်ရပ်တွေဟာ မြန်မာပြည်တွင်းက အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက် ဆက်စပ်နေတယ်လို့လည်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ မူဆလင်တွေဟာ အကြမ်းဖက်ခံရ မှုတွေကြောင့် မြန်မာပြည်ကနေ ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ အများစုက မူဆလင်အများစုနေထိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကို လှေစီးပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ မူဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ ဟာ မြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး အဲဒီကတဆင့် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းနဲ့ မြို့တော်ဟောင်း ရန်ကုန်အထိ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Anifah Aman က ခုလိုပြောပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မူဆလင်အများစုရှိရာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ လထဲကပဲ မြန်မာသံရုံးကို အကြမ်းဖက် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ ကြံစည်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ ဒီလို ကြံစည်ခဲ့တာကို အချိန်မီ ကြိုတင် တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သံရုံးကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ဦးဆောင်သူအဖြစ် သံသယရှိသူလို့ ယူဆရယူက သူတို့က မြန်မာပြည်တွင်းမှာ မူဆလင်တွေကို တိုက်ခိုက်တာတွေအပေါ် လက်တုံ့ပြန်ဖို့အတွက် အခုလို စီစဉ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း အာဏာပိုင်တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလိုမျိုး မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကြားမှာ မကြာသေးခင် သီတင်းပတ်တွေ အတွင်း အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဲဒီကနေ တဆင့် ဒေသတွင်းအထိ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပျံ့နှံ့လာမှာမျိုး စိုးရိမ် ပူပန်မှုတွေလည်း ရှိနေကြတာပါ။
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ ၃ သောင်းလောက် ဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြမ်းဖက်မှု တွေကြောင့် မြန်မာပြည်ထဲက ရွှေ့ပြောင်း မူဆလင်တွေရဲ့ အရေအတွက်ဟာ အခု မှတ်ပုံတင် ပမာဏထက် အဆမတန်များကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးက UNHCR က ပြောပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက်အတွင်း၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဆီကို ပြန်လှည့်စ ကာလအတွင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကလမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မူဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်ဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် တရားသဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အတွက်တော့ မြန်မာအစိုးရက မဖြစ်စလောက် အရေးယူပြတာကိုပဲ တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ပြောကြပါတယ်။
အခုလို အာဆီယံ နိုင်ငံတွေက ဘရူနိုင်းမှာ အစည်းအဝေးကျင်းပပြီး ဒေသတွင်း အတွက်ပါ မြန်မာပြည်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဘာသာရေးနဲ့ မူဆလင်ရေးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပျံ့နှံ့လာမှာကို စိုးရိမ်လို့ ကာကွယ်ဟန့်တားမှုတွေ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းကြ၊ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းကြ လုပ်နေကြတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ သံတွဲမြို့မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထပ်မံ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်တဲ့အကြောင်း ပြန်ကြားရေး ဌာန ဒု ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် အင်တာနက် လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီသတင်းကြောင့် မြို့သစ်ရပ်ကွက်မှာ အိမ်နှစ်လုံး မီးလောင်ကျွမ်း ခဲ့ရပြီး ဒေသအာဏာပိုင်တွေက ညမထွက်ဖို့ လှည့်လည်ကြေညာနေသလို၊ မြို့အဝင်အထွက်လမ်းတွေကိုလည်း ပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ သိရကြောင်းနဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို ဒေသခံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဥပဒေနဲ့အညီ ဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း ဆက်လက် ဖော်ပြထားပါတယ်။
Posted by Penang Myanmar Muslim Youth Helping Association at 7/02/2013 07:33:00 AM No comments:
ဘုရားလုပ်တဲ့ပြသနာ မဟုတ်၊ လူလုပ်တဲ့ပြသနာ
In Burma, there is no God Problem,
but all problems are man-made.
There is no TIME problem , there is SPACE problem.
We have no SPACE,
There is no space for FOOD , Shelter, Job, Plough and Dignity,
Even we don't haveasecure place forasmall kiss.
there is no woman problem ,
it is Man problem.
It is not their problem,
It is because of ignorance.
ဘုရားလုပ်တဲ့ ပြသနာ မဟုတ်။
Time ( အချိန်) ပြသနာမဟုတ်
Space ( နေရာ) ပြသနာ။
လူတိုင်းမှာ အချိန် ချမ်းသာသလောက်၊
စားဖုို့နေရာမရှိဘူး။
သိက္ခာကို ပြန်သဖို့ နေရာမရှိဘူး
ဒါက သူတို့ ပြသနာမဟုတ်။
ဒါက ငါဒို့ ပြသနာ ။
Posted by Penang Myanmar Muslim Youth Helping Association at 6/28/2013 05:47:00 PM No comments:
Posted by Penang Myanmar Muslim Youth Helping Association at 6/28/2013 05:38:00 PM No comments:
မျက်မှောက်ရေးရာ / သတင်းသုံးသပ်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း၊ မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာတို့အကြောင်း ဝေဖန်ရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို မြန်မာပြည်သူကို ဖတ်ရှုခွင့် ပေးသင့်မပေးသင့်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၊ မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂဥက္ကဌ ဦးမောင်မောင်မြင့်တို့နဲ့ ဦးကျော်ဇံသာ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ "The Face of Buddhist Terror" Time မဂ္ဂဇင်းမှာ ဒီဆောင်းပါးဟာ အခုတလော မြန်မာနိုင်ငံကို အတောလေး ဂယက်ရိုက်ခက်နေတဲ့ ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာပြည်သူအတော်များများဟာ ဒီဆောင်းပါးကို မြင်ရဖတ်ကြရဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လဲ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ရေးသားချက်ကို လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အရေးပေါ်ကာလ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီက ကြေငြာချက်ထုတ်ပြီးတော့ ဒီဆောင်းပါးကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီပိတ်ပင်တဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆရာဦးဝင်းတင်ရဲ့သဘောထားကို ပထမဦးဆုံး ကြားချင်ပါတယ်။
ဦးဝင်းတင် ။ ။ ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းသြဇာရှိတဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေကတော့ ဘာဘဲပြောပြော လွတ်လပ်တဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ သဘောမပေါက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ပြည်တွင်းက သဘောကတော့ ဘာလဲဆိုတော့ ပြည်တွင်းက မီဒီယာတွေကို သူတို့ လည်ပင်းညှစ်ချင်သလို ညှစ်ရမယ်မှန်း သိသလို အပြင် ပြည်ပမီဒီယာတွေကိုလည်း သူက လည်ပင်းညှစ်ချင်တာပေါ့။ လည်ပင်းညှစ်လို့ မရရင်တောင်မှ ပြည်ပမီဒီယာတွေကို လိမ်လည်ချင်တယ်၊ လှည့်ဖျားချင်တယ်၊ ဟန့်တားချင်တယ်ပေါ့။ အဲဒါတွေရှိနေတယ်လို့ ကျနော် ယူဆတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စဟာ ဘာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ဘက်ကနေကိုယ့် ထိန်းသိမ်းဖို့ ပြောင်းလဲဖို့ သို့မဟုတ်လည်း မှန်ကန်စွာ တုန့်ပြန်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ပုံ မရသေးဘူးလို့ ကျနော် အဲဒီလိုပဲ ယူဆပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ ပြည်ပမီဒီယာတွေဘက်က စောင့်စည်းအပ်တဲ့ ကျင့်ဝတ်ကော မရှိဘူးလား။ ပြည်ပမီဒီယာတွေဘက်က စောင့်စည်းအပ်တဲ့ကျင့်ဝတ် မြန်မာနိုင်ငံလို အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြည်ပမီဒီယာရဲ့ရေးသားချက်ဟာ တခါတခါ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်ကို နှောက်ယှက်တာတွေ အဟန့်အတား ဖြစ်သွားစေနိုင်တာတွေ ရှိကောင်းရှိလာလိမ့်မယ်။ အဲဒါမျိုးတွေကျတော့ ဘယ်ဘက်က စောင့်စည်းရမလဲ ဆရာ။
ဦးဝင်းတင် ။ ။ အဲဒါကတော့ ကျနော်ကတော့ ထင်တာကတော့ ကိုယ့်ဘက်က ကိုယ်ကောင်းဖို့ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရင် ပြည်ပကနေပြီးတော့ လွဲမှားတဲ့ အယူအဆတွေ ပေါ်လာရင်လဲ ဒါတွေကတော့ ကိုယ့်ဘက်ကမှန်အောင် ပြင်ဖို့ပဲလိုတယ်။ ကျနော် ဥပမာ ဒီနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့ စကားလေးတခုရှိတယ်။ တိုင်း(မ်) မဂ္ဂဇင်းကနေပြီးတော့ မွစ်စလင်ကိစ္စတွေကို ဦးဝီရသူ ဘာတို့ ရေးတာနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီကမ္ဘာ့မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ဘာတွေကနေပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးအပေါ်မှာ ဝေဖန်လာတယ် ပြစ်တင်လာတယ် တိုက်ခိုက်လာတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘာသာ တရားပေါ်မှာ အခြားသူများကနေပြီးတော့ လွဲမှားတဲ့အမြင်တွေ မြင်မလာအောင်လို့ ကိုယ့်ဘက်က သေချာပြုပြင်ဖို့လိုတယ် ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ မှန်ကန်တဲ့ တုန့်ပြန်မှု၊ မှန်ကန်တဲ့ ရပ်တည်မှု ရှိဖို့လိုတယ်လို့ ပြောသွားတယ်။ ကျနော်က အဲဒါ သဘောကျတယ်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူများတွေက ကိုယ့်ကို အပြစ်တင်လာရင် အပြစ်တင်တာချည်းပဲ ပြောမယ့်အစား ကိုယ့်ဘက်ကကော အဲ့ဒီအပြစ်တင်တာနှင့် ကင်းလွတ်အောင် ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ အမှားကင်းစင်အောင် အပြစ်ကင်းစင်အောင် သို့မဟုတ်လည်း သန့်စင်အောင် ကိုယ့်ဘက်က လုပ်ဖို့ ရပ်တည်ဖို့ လိုတယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီဗမာပြည်နိုင်ငံရေးအပြောင်း အလဲတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြည်ပစာနယ်ဇင်းများကနေပြီးတော့ ကိုယ်နှင့်မကြိုက်တဲ့ ကိုယ်နှင့်မလိုလားတဲ့ သို့မဟုတ်လည်း ကိုယ်ကနေပြီးတော့ အလေ့အထမရှိတဲ့ ပုံစံတွေနှင့် ရေးသားလာမယ် ပြောဆိုလာမယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး သိသင့်တာက ကိုယ့်ဘက်ကိုယ် ပြင်ပေးရမယ် ကိုယ့်ပေါ်မှာ အထင်မလွဲအောင် ကိုယ့်ပေါ်မှာ ဒီအယူအဆတွေ မမှောက်မှားအောင် လုပ်ဖို့ပဲ။ အဲဒါ ပိုပြီးတော့ အရေးကြီးတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ သွားပြီးတော့ သူများကို ပြန်လက်ညိုးထိုးနေမယ့်အစား ကိုယ့်ဘက်ကနေကိုယ် အပြစ်ကင်းအောင်လို့ ပြင်ရမယ် ပြောင်းရမယ် အဲဒီလိုပဲ ယူဆပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ဆရာ ဦးမောင်မောင်မြင့်ကကော ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ။
ဦးမောင်မောင်မြင့် ။ ။ ဒီအခုလိုမျိုး တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းကနေပြီးတော့ ဦးဝီရသူရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုဖော်ပြပြီးတော့ ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနယ်ပယ်မှာ အခုဖြစ်နေတဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပွားလာတဲ့ အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေအကြောင်း ရေးတဲ့ကိစ္စကို ကျနော်အနေနှင့်ကတော့ မြန်မာပြည်ကို ထိခိုက်အောင်လုပ်တယ်လို့ ကျနော် မမြင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ တင်းမာမှုတွေပေါ်နေတာ ဟိုးရှေးရှေး တုန်းကဟာတွေကို ခုနထားလို့ ဒီ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် တစ်နှစ်ခွဲလောက်က ပေါ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေထဲက အဲဒီအချိန်ကတည်းက ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် တော်တော်လေးကို အတိမ်းအစောင်းမခံနိုင်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပြီးတော့ အဲဒီနောက်ပိုင်း မိတ္ထီလာမှာ ဥက္ကံမှာ လာရှိုးမှာ ဒါတွေ ဆက်တိုက် ဆက်တိုက် ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ မှ အခုကျတော့မှ ဒီတိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းကနေပြီးတော့ ဒီကိစ္စကို ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီတိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းကြီးကနေပဲ ဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင် အရှင်ဇနကာဘိဝံသလို တကယ့်သာသနာ အာဇာနည်ကြီးတွေကိုပဲ သူတို့မဂ္ဂဇင်းရဲ့မျက်နှက်ဖုံးမှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးတယ်။ ရွှေဝါရောင်သာသနာ့ လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်တဲ့ အချိန်တုန်းကလည်းပဲ ဒီရွှေဝါရောင်သံဃာတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ သတင်းတွေကို တိတိကျကျ ဖော်ပြပေးခဲ့ဖူးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပတ်သက်ရင်လည်းပဲ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကို အားပေးတဲ့သဘောပါတဲ့ ဆောင်းပါးမျိုးတွေ နောက်ပြီးတော့ မျက်နှာဖုံးတွေကို သူတို့ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါတွေကို အကုန်လုံး ပြန်ချုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းဟာ ဒီကိစ္စကို မြန်မာပြည်ကို နာရကောင်းတက်လို့ နာရကောင်းစေရဲ့ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနှင့်လုပ်တယ်လို့တော့ ကျနော် မမြင်ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ နာရကောင်းစေရယ်လို့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ဆရာ။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာပြည်ဘက်က တချို့ရဲ့အမြင်က ဒါဟာ အဖြစ်မှန်မဟုတ်ဘူး။ ဦးဝီသူရ ဆရာပြောသလို အဲ့ဒီ နမူနာကိုပြောရင် သူနှင့် ပတ်သက်လို့ကတော့ ဝေဖန်နိုင်တယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုလုံးကို သူတို့ဖော်တဲ့ ပုံရိပ်ဟာ တိမ်းစောင်းနေတယ်လို့ တချို့က ထောက်ပြကြပါတယ်။ အဲဒါသူတို့က နစ်နာစေလို့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်လာတာကို ပြောတာ ဆရာ။
ဦးမောင်မောင်မြင့် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ သတင်းစာတစ်စောင် မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင် အထူသဖြင့် ဒီလိုမျိုး အရှိန်အဝါကြီးတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေရဲ့ ဒီအရှိန်အဝါကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ အနည်းနှင့်အများ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လို့တော့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှု ကျနော် ပြန်စဉ်စားကြည့်တဲ့အခါ ကျတော့ အခုလောလောဆယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းက မဖော်ပြခင်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံ လူမျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်တဲ့ မုန်းတီးမှုတွေ ပွားလာတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ လူတွေ အများကြီး သေကြတယ်။ ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ အစိုးရက တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူတာမျိုးတွေ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုအချိန်ကျတော့ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းကြီးက ဖော်ပြလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ အချိန်ကျတော့ သမ္မတရုံးကနေပြီးတော့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကို ကန့်ကွက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စာပို့တယ်။ အနည်းဆုံးအားဖြင့် ဒါကိုတော့ သူတို့လုပ်ဆောင်မယ်။
သာသနာ့/သံဃာ့ အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာလည်း ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စောစောပိုင်းတုန်းကတည်းက ဒီလူမျိုးရေးအထိကရုန်းတွေ ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဒုက္ခသည်တွေကို လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးတွေလည်းပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ စောစောပိုင်း တုန်းက လူမသိပေမယ့်လို့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒီအကြောင်းတွေကို လူတွေက ပြောလာကြတယ်။ Facebook တို့လိုမျိုး နေရာတွေမှာ သံဃာတွေရဲ့ကောင်းမှုတွေကို ဖော်ပြလာကြတယ်။ နောက်ပြီး တချိန်းတည်းမှာလည်းပဲ အခု မနေ့တနေ့ကပဲ သီတဂူဆရာတော်ကြီးလို အကျော်အမော် ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ကနေပြီးတော့ ဒီလူမျိုး ရေးကိုစောင်းပေးပြီးတော့ လုပ်မယ့်အစားကို အကုန်လုံး မျှမျှတတဖြစ်ဖို့ စဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ဆင်ခြင်ဥာဏ်သုံးဖို့ဆိုတာမျိုး မိန့်ကြားလာတာမျိုးတွေ ကျနော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် လှုပ်ရှားမှုမဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်တယ်။ သို့သော်လည်းပဲ အပြုသဘောကိုဆောင်လာတဲ့ လှုပ်ရှားမှုမျိုးလို့ ကျနော်အနေနှင့် မြင်ပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ ကျနော် ထောက်ပြချင်တာတခုကတော့ ဒီအရင်တုန်းက မှန်ပါတယ် ကျနော်တို့ တိုင်းမ်တို့လို့ Newsweek တို့လို မဂ္ဂဇင်းမျိုးကို ဖတ်ခွင့်မရဘူး။ သို့သော် အခုလောလောဆယ် ကျနော်တို့သိရတဲ့ အနေအထားအတိုင်းဆိုရင်တော့ အဲဒီတိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းဟာကို ဘာသာပြန်ပြီးတော့ ရန်ကုန်တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခွင့်ပေးပေမယ့်လို့ ဒီတိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကို သွားတဲ့ Website ကို သူတို့ ဒီလက်ရှိ အစိုးရကနေပြီးတော့ ပိတ်ထားတာကို ကျနော်တို့ ကြားရပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အဲဒီ မဂ္ဂဇင်းကို ဗမာပြည်ထဲ တင်ခွင့် ပေးမယ်မပေးဘူး ဖတ်ခွင့် ပေးမယ်မပေးဘူး ဆိုတာတောင်မှ ကျနော်တို့ မသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြားရတဲ့သတင်းတွေအရတော့ ဒီမဂ္ဂဇင်းကို ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ကျနော်တို့ ကြားရပါတယ်။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မီဒီယာကို အသုံးချပြီးတော့ အစိုးရအနေနှင့် တနည်းတဖုံ လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးလို့ ထင်တယ်။
ဦးဝင်းတင် ။ ။ ကျနော်တို့ မီဒီယာတွေကလည်း ခုနကပြောသလို ကျနော် မီဒီယာတခုမှာ ကျနော် ပြောတာရှိပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင်တော့ ဦးဝီရသူ တို့ပြောတဲ့ဟာနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော် ဘာမှမပြောချင်ဘူး။ ဦးဝီရသူ လုပ်တာတွေဘာတွေကိုလည်း ကျနော် မှားတယ်မှန်တယ် မပြောချင်ဘူး။ ကောင်းတယ် ဆိုးတယ်လည်း ကျနော် သိပ်မပြောချင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါလူတိုင်းလည်း သိနေတဲ့ ကိစ္စ။ နောက်ပြီးတော့ တချို့ဟာတွေက ကျနော့်အယူအဆအရဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီ သူရဲ့အနေအထားတွေကလည်း သိပ်ပြီးတော့ ကောင်းလှတဲ့အနေအထား မရှိတဲ့အတွက် တခြားမီဒီယာ တွေက သူ့ကို ဝေဖန်တယ်အပြစ်တင်တယ်ဆိုရင် ကျနော် ပြည်ပမီဒီယာတွေ မှားတယ်မှန်တယ် ကျနော်မပြော ချင်ဘူး။ သို့သော် တဘက်ကနေကျနော် ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ ပြည်ပမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ ဝေဖန်တဲ့နေ ရာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဝေဖန်တဲ့နေရာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အကြမ်းဖက်ဝါဒဆိုတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်အောင် အကြမ်းဖက်ပုံရိပ်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာမျိုး ရေးတဲ့ဟာမျိုးကျရင်တော့ ကျနော်က သိပ်လက်မခံချင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါ ဘာသာတခုလုံးနှင့်ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စ။ ဦဝီရသူနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ သူ ဝေဖန်လို့ ရတယ်။ ဦးဝီရသူရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပဲ ဝေဖန်ဝေဖန် သူရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဘာတွေလည်း Perfect ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် အကုန်လုံး ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ အဲဒီအတွက် သူကို ဝေဖန်တာ ကျနော် ဘာမှမပြောချင်ဘူး။ သို့သော် ဗုဒ္ဓဘာသာလိုဟာမျိုး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လုပ်တဲ့ဘာသာရပ်တခုကို ဒီအကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့် နှိုင်းယှဉ်တယ် သို့မဟုတ်လည်း ရဟန်းတော်တပါးကို ဘင်လာဒင်လိုဟာမျိုးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လောက်တဲ့အထိ ဖြစ်လာတာမျိုး ဖြစ်လာရင်တော့ အဲဒီလောက်ထိ ကမ္ဘာ့သတင်း စာနယ်ဇင်းဖက်ကလည်း ထိန်းသိမ်းဖို့တော့ နားလည်ဖို့တော့ လိုလာမယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ဦးမောင်မောင်မြင့် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ။ ကျနော် ဒီမဂ္ဂဇင်းကို ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ ဒီမဂ္ဂဇင်းဟာ ဦးဝီရသူကို မျက်နှက်ဖုံးမှာ တင်ထားသော်ငြားလည်း မဂ္ဂဇင်းထဲမှာတော့ ပထမပိုင်း လေးပုံတစ်ပုံလောက်က ဒီအာရှတိုက်နှင့် ဘာသာပေါင်းစုံအကြောင်းကို ရေးထားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဦးဝီရသူအကြောင်းကို ရေးပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သိရိလင်္ကာနိုင်ငံက လှုပ်ရှားမှုတွေ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းရေးပါ တယ်။ ပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းရေးပါတယ်။ ဒါတွေကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဦးဝီရသူအကြောင်းက လေးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲ ပါပါတယ်။ နောက်ပြီး ပါတဲ့အထဲမှာလည်း အဲဒီအချက်အလက်တွေက ကျနော့် အမြင်အရ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်မသိတဲ့ အချက်အလက်တွေ မပါပါဘူး ခင်ဗျ။ နောက်ပြီး တချို့အချက် အလက်တွေဆိုရင် တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းက မဖော်ပြတဲ့အချက်တွေတောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒါကို ထောက်ကြည့် ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကရေးတဲ့ကိစ္စဟာ ကျနော့်အမြင်အရ မဟုတ်တာတွေ မမှန်တာတွေ ရေးတယ် ချဲ့ကားပြီးရေးတယ်လို့ ကျနော် မမြင်ပါဘူး။ သူရေးတာကတော့ အဓိကအားဖြင့် ဦးဝီရသူနှင့် ပြောခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးကိုပဲ အဓိကထားပြီး ရေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဦးဝီရသူကို အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးစွပ်စွဲထားတာလည်း တခုမှမပါပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဦးဝီရသူကို ကာကွယ်ပြောတာမျိုးတော့ သိပ်မရှိကြဘူးပေါ့။ တချို့ကတော့လည်းပဲ။ ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့လည်းပဲ ကာကွယ်ကြကောင်းကြမှာပေါ့။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ အဓိကထား ဆွေးနွေးလိုတဲ့ အပိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တခုက Buddhist Terror ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို လူတွေက နည်းနည်း ခံပြင်းကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဆိုပြီးတော့ သုံးတာကို သိပ်ပြီးလက်မခံချင်ကြဘူး တချို့ကလည်း ဆရာ။
ဦးမောင်မောင်မြင့် ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီ Buddhist Terror ဆိုတဲ့သဘော ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို တွဲပြီး သုံးတဲ့ကိစ္စဟာ သူတို့မှာ သုံးစရာ နောက်ပြီးတော့ ပြစရာ အထောက်အထားတွေ ရှိလို့သာ ရေးလာတာလို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေ မွစ်စလင်အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့တွေ ကြားခဲ့တာ သိခဲ့တာ ကျနော်တို့ အများကြီးပါ။ မွစ်စလင်တွေလည်း တကယ်ပဲ အကြမ်းဖက်ခဲ့လို့ ဒီအမေရိကားမှာဆိုရင် အသိဆုံးပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဒီဘာသာတရားတခုကို ချုံပြီးပြောတာကိုတော့ မွစ်စလင်ကိုပဲပြောပြော ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲပြောပြော ခရစ်ယာန်ကိုပဲပြောပြော ချုံပြီးပြောတယ်ဆိုရင်တော့ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒါကိုတော့ ကျနော် လက်ခံပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ကျနော်တို့ကို အပြောခံထိတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့မှာ အပြောခံထိစရာအကြောင်းတွေ ရှိနေလို့တာ အပြောခံထိတယ်လို့ ကျနော်မှတ်ယူပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ သောတရှင်များ ခင်ဗျာ။ တကယ်တော့ လူ့သဘာဝက မဖတ်ရဘူးလို့ ပိတ်ပင်ထားလေ ပိုဖတ်ချင်လေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ လူတွေဟာ အလုအယက်ရှာဖွေ ဖတ်ရှုရင်းနှင့် ဒီလိုဖတ်တဲ့လူတွေကို အစိုးရက အရေးယူရ ဖမ်းဆီးရ ဒါနှင့် ပြဿနာတွေတောင် ပိုပြီးပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ ကျနော် ရိုးသားစွာ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဖတ်ချင်တဲ့လူ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖတ်နိုင်တယ်လို့ လွတ်ထားပေးလိုက်ရင်လည်းပဲ လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းပြီးတော့ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ ဂယက်ရိုက်ခက်မှုဟာ ဒီလောက်တောင်မှ ပြင်းထန်လာစရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ ထင်မိပါကြောင်း ပြောကြားရင်း ဒီနေ့ အစီအစဉ်ကို နိဂုံးချုပ်လိုက် ပါတယ်။
Posted by Penang Myanmar Muslim Youth Helping Association at 6/28/2013 07:16:00 AM No comments:
ငြိမ်းချမ်းအေး| June 26, 2013 | Hits:1
&amp;lt;a href='http://ox.irrawaddy.org/openx/www/delivery/ck.php?n=a7537b9b&amp;amp;amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'&amp;gt;&amp;lt;img src='http://ox.irrawaddy.org/openx/www/delivery/avw.php?zoneid=59&amp;amp;amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;amp;amp;n=a7537b9b' border='0' alt='' /&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;
ဆရာ သစ္စာနီ ရဲ့ ဆောင်းပါး “တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း မီးလောင်ရာ လေပင့်တာလား” ဧရာဝတီ ဆောင်းပါး ဖတ်ရတယ်။ ဆရာ့ စာတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးခဲ့တာကြာပေမယ့် ဆရာဟာ ကျနော်တို့ မျိုးဆက် ငယ်ဘဝ စိတ္တအာဟာရ အတွက် အရေးပါ ခဲ့သူ တယောက် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆရာ့ကို လေးစားမှု ရှိလျက်ပါပဲ။ ဆရာ့ရဲ့ ကဗျာ၊ ဝတ္ထု၊ အက်ဆေး စာသားတွေ အလွတ်ရွတ်ပြနိုင်တဲ့ အချိန်တွေကို သတိရမိတယ်။ “သံချေးတက်နေသော တွယ်အပ်ကလေး” ကို စွဲလမ်းမိလို့ ငယ်ဘဝချစ်ရသူ ကောင်မလေးရဲ့ ကျောင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲက လိုင်စင်ဓာတ်ပုံကလေးကို သိမ်းဖူးခဲ့တယ်။ ကောင်မလေးက အခုအချိန်ထိ ဓာတ်ပုံထဲကနေ မျက်မှောက်ကုတ်ပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ကြည့်နေသေးသလို ဆရာ့ ရဲ့ အရေးအသားတွေကလည်း အခုအချိန်ထိ ကျနော့် ရင်ထဲမှာ ရှိနေသေးပါတယ်။
ခေတ်ပြောင်းချိန်လို့ ဆိုကြတဲ့ အခု နှစ်ပိုင်းမှာ ဆရာ နိုင်ငံရေး နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အလုပ်တချို့၊ နိုင်ငံရေး (သို့ ) မျက်မှောက်ရေးရာ ဆောင်းပါးတွေလည်း အားပြု ရေးနေတယ်ဆိုတာလည်း ကြားမိပေမယ့် လက်လှမ်းမမီလို့ တခါမှာတော့ သေချာ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဆရာ အွန်လိုင်းမှာ ရေးတဲ့ စာတချို့သာ သတိထားမိပါတယ်။ ကျနော့်လို ဘာမဟုတ်၊ ညာမဟုတ်တောင် “မတော်တဆ မဟုတ်တဲ့” နှစ်ရှည်လများ သည်းခြေပျက်၊ အချဉ်ပေါက်နေမှုကို ဖြေဖျောက်နိုင်အောင် အွန်လိုင်းမှာ မျက်မှောက်ရေးရာ နဲ့ ကိုယ်ပိုင် အာဘော် နိုင်ငံရေး ဆောင်းပါးတွေ ရေးနေသေးတာ ဆရာ့ လို စာစုံ ရေးနိုင်စွမ်းပြီး စာပေသြဇာ တိက္ကမကြီးတဲ့ စာရေးဆရာကြီး တယောက် အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး နဲ့ မျက်မှောက်ရေးရာ အတွေးအမြင် ဆောင်းပါးတွေ ရေးတာ ဆရာ့ စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် ဗဟုသုတပွား စဉ်းစားစရာ တိုးစေမှာ သေချာပါတယ်။ ဖတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ ဧရာဝတီ မှာ နောက်ဆုံး ရေးတဲ့ ဆောင်းပါး “တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း မီးလောင်ရာ လေပင့်တာလား” ပါ ဆရာ့ သဘောထား အမြင်ကိုလည်း လေးစားပါတယ်။
(စာရေးသူ သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် အိုင်တီ နှင့် စီးပွားရေး မဟာ ပညာ ရပ်များကို လေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီး
ခေတ္တ နေထိုင်လျက်ရှိကာ ဝါသနာအရ အွန်လိုင်း မီဒီယာ များတွင် မျက်မှောက်
ရေးရာ နှင့် အထွေအထွေဆောင်းပါးများ
ရေးသားနေသူ တယောက် ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်လိုသူများ nyeinchanaye81@gmail.com ထံ စာရေးဆက်သွယ်နိုင်သည်။)
ဒါပေမယ့် ဆောင်းပါးပါ ဆရာ ရဲ့ သဘောထား တချို့ နဲ့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါး ကို ဆရာ့ ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူပုံ တချို့ ကိုတော့ ဆရာ့ ဆောင်းပါး ဖတ်ဖြစ်သူ တယောက် အနေနဲ့ ပြန်လည် ဆေးနွေးလိုပါတယ်။
ပထမ ဦးဆုံး အနေနဲ့ မူရင်း တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါး ပါ စာကြောင်း “Hard-line monks, like those in the BBS, have turned on minority Muslims and Christians, especially since the 26-year war against the largely Hindu Liberation Tigers of Tamil Eelam insurgency ended four years ago.” စာကြောင်းကို “BBS အဖွဲ့ဝင်တွေလို သဘောထား တင်းမာတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက ၂၆ နှစ်ကြာ တမီးလ် အီလန် ဟိန္ဒူ ကျားသူပုန်တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်အကြာက ရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ လူနည်းစု မွတ်စလင်နဲ့ ခရစ်ယာန်တွေဘက်ကို မြားဦးလှည့် လာပါတယ်” လို့ ဆရာ့ ဆောင်းပါး မှာ ရေးထားတာ သတိထားမိပါတယ်။ ဆရာ့လို အင်္ဂလိပ်စာပေမှာပါ နှံ့စပ် ဟန်တူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက် အနေနဲ့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း မူရင်း အင်္ဂလိပ် ဆောင်းပါး ကို ဖတ်ပြီးပြီလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ မဖတ်ရသေးဘဲနဲ့ အခြား ထပ်ဆင့်တင်ပြတဲ့ မီဒီယာ ရဲ့ အာဘော်ပါ ဘာသာပြန်မှုကိုသာ ဖတ် ပြီး ဆရာ့ဆောင်းပါးမှာ တသဘောတည်း ယူသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော် အံ့သြမိမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဆရာ့လို အင်္ဂလိပ်စာတတ် တယောက် ကို ယခု တွဲလျက် ဖော်ပြတဲ့ မူရင်း အင်္ဂလိပ်စာကြောင်း ဘာသာပြန်ပြစရာ လိုမယ် မထင်ပါ။
ဒါပေမယ့် အားလုံးသော စာဖတ်သူ အများ အတွက် မူရင်း စာကြောင်း အဓိပ္ပာယ်ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ရရင် “အထူးသဖြင့် ၂၆ နှစ်ကြာ တမီးလ် အီလန် ဟိန္ဒူ ကျားသူပုန်တွေ နဲ့ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်က အပြီးအပြတ် နီးပါး အဆုံးသတ်ပြီးတဲ့ အချိန်ကတည်းက (အချိန်နောက်ပိုင်းမှာ) BBS အဖွဲ့ဝင်တွေလို သဘောထား တင်းမာတဲ့ ရဟန်းတော်တချို့ဟာ လူနည်းစု မွတ်ဆလင် နဲ့ ခရစ်ယာန်တွေဘက်ကို မြားဦးလှည့်လာပါတော့တယ်” လို့သာ ရပါတယ်။
ဆိုတော့ မူရင်း အင်္ဂလိပ် စာကြောင်းမှာ ဆရာ့ ဆောင်းပါး မှာ စွပ်စွဲထားသလို “တမီးလ် ကျားသူပုန်တွေကို သဘောထားတင်းမာတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက ရှင်းလင်းတယ်”ဆိုတဲ့ သဘောလုံးဝ မပါပါ။ “ရှင်းလင်းတယ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံး အသုံးလည်း ဟုတ်ကို မဟုတ်ပါ။ မူရင်း စာကြောင်းပါ “ended” စကားလုံးက “စစ်ပွဲ အဆုံးသတ်သည်” ကိုသာ ဆိုလိုပါတယ်။ စာကြောင်း ရှေ့က ခံထားတဲ့ ကြိယာဝိသေသန “largely” အသုံးကြောင့် “almost completely” သဘော “အပြီးအပြတ် နီးပါး စစ်ပွဲ အဆုံးသတ်သည့်(လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်က အချိန်)” ဟု အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ သဘောထားတင်းမာတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတချို့ အခြား လူနည်းစု နှစ်အုပ်စု အပေါ် ပို (အထူးသဖြင့်) ပစ်မှတ်ထားလာတဲ့ အချိန်ကို ဖော်ပြတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ စာကြောင်း ကို “since” ဆိုတဲ့ “အချိန်” ဖော်ပြတဲ့ “conjunction” စကားဆက် (စာကြောင်းဆက် အသုံး) နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ခြင်းဟာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ကြောင့်လို့ ရေးမထားသလို ဘယ်သူ့ကြောင့်မှလို့လည်း ရေးမထားပါ။ နောက်ဆက်တွဲ စာကြောင်းဟာ အချိန်ကို ဖော်ပြတဲ့ စကားစု “clause” သက်သက် သာ ဖြစ်ပါတယ်။
“since” အချိန် ဖော်ပြမှု “conjunction” အသုံးကို အများ ပိုမို ရှင်းလင်းအောင် လွယ်ကူတဲ့ ဥပမာ စာကြောင်း ပေး ရရင် “I’ve been very busy since I came back from holiday.” “အလုပ်ရှုပ်နေတာ (အလုပ်စရှုပ်နေခဲ့တာ) အားလပ်ရက်က ပြန်လာကတည်းကပါပဲ ကွာ” စာကြောင်း မှာ “အလုပ်ရှုပ်တာ အားလပ်ရက်က ပြန်လာလို့” ဆိုတဲ့ သဘော အဓိပ္ပာယ် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မသက်ရောက်ဘဲ အလုပ်စရှုပ်တဲ့ “အချိန်” ဖော်ပြခြင်း သက်သက်သာ ဆိုတာ လွယ်လွယ်ကူကူ သိမြင်နိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဒုတိယ အနေနဲ့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း မူရင်း အင်္ဂလိပ်စာစု “Since Burma began its reforms in 2011, with the junta giving way toaquasi-civilian government, surprisingly few people have called for holding the army accountable for its repressive rule. This equanimity has been ascribed to the Buddhist spirit of forgiveness. But Burma’s democratization has also allowed extremist voices to proliferate and unleashed something akin to ethnic cleansing.” ပါ နောက်ဆုံး စာကြောင်း ကို “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေက လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေမယ့် အစွန်းရောက်ဝါဒကို ပျိုးထောင်ပေးပါတယ်” လို့ ဆရာ အနက်ကောက် ထားပြန်ပါတယ်။ ဒါကို ဖတ်ရတော့ ဆရာ မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါး ကို ကိုယ်တိုင် တကယ် မှ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ရဲ့လား ကျနော့်စိတ်မှာ ပို သံသယ ဖြစ်မိလာပါတော့တယ်။
အထက်ပါ မူရင်း စာစုမှာ “ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ စခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ စစ်တပိုင်း အစိုးရ အာဏာရလာချိန်မှာ လူနည်းစုကပဲ စစ်အုပ်စု (အရင်) ဖိနှိပ်ခဲ့မှုတွေကို တာဝန်ယူပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဒီလို အလိုမကျစရာ၊ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှု ရှိရှိ ရင်ဆိုင်တာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ခွင့်လွှတ်နိုင်မှု စိတ်ဓာတ် ကြောင့်ပါပဲ” လို့ စပျိုးလာတယ်။ နောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာ “ဒါပေမယ့် ဒီလို ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့မှု ဖြစ်စဉ်ဟာ အစွန်းရောက်တဲ့ အသံတွေကိုလည်း တပါတည်း ကျယ်လောင်လာစေတယ်၊ လူမျိုးစု (တခုခု) သုဉ်းအောင် သုတ်သင်ဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ အလား သဏ္ဌာန် တူတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေလည်း ရုတ်တရက် ချက်ချင်း ထိန်းချုပ်မရ (ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ) တွဲလျက် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်” လို့ အဆုံးသတ် ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ မူရင်းသဘောဟာ ဆရာ ကောက်ချက်ဆွဲထားသလို ဗမာ့ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လမ်းကြောင်း တခုလုံးကို ကမ္ဘာ က အထင်အမြင်လွဲအောင် သိမ်းကျုံးဆိုထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပြုပြုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ အတူ အစွန်းရောက်မှု ဖြစ်စဉ်တွေလည်း တပါတည်း တွဲလျက် မြင်လာရတယ် ဆိုတဲ့ သဘောသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ထင်ရှင်းရှင်း သိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးစာကြောင်း ဘာသာပြန်မှုမှာ အဓိက အရေးပါတာက ခက်ခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေ မဟုတ်ဘဲ လွယ်ကူတဲ့ “also” ဆိုတဲ့ စကားလုံးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ စာကြောင်းမှာ “also” ကို ထည့်ဘာသာပြန်ဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှသာ ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်နဲ့ အတူ အခြား မကောင်းတဲ့ အခြေအနေ တခု(အစွန်းရောက်မှု) လည်းပဲ “တပါတည်း တွဲလျက်” ပါလာတယ်ဆိုတဲ့ မူရင်းဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ အာဘော်ကို ပုံဖော်နိုင်ပါမယ်။ နောက်တခုက လုံးလုံး ထည့်ဘာသာမပြန်ခဲ့တဲ့ “akin” ဆိုတဲ့ စကားပါ။ “အလား သဏ္ဌာန် တူ၊ သဘောနီးစပ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ထွက်ပါတယ်။ ဒါလည်း မူရင်းဆောင်းပါးရှင် အာဘော် အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
ဆိုတော့ ဆရာ ခင်ဗျာ။ မူရင်းဆောင်းပါးကို အခုလို မတုံ့ပြန်ခင် (ဆရာ့သဘောထား မရေးခင်မှာ) မူရင်း အင်္ဂလိပ်လို ကို တကယ် ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သလား ဆိုတာ အမှန်တကယ်ကို မေးခွန်းထုတ်ချင်မိတာ ကျနော် မလွန်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။
တတိယ အချက် အနေနဲ့ “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များ အားလုံးကို ၀ါးလုံးရှည်နှင့် သိမ်းရမ်းခြင်း ဟု ခံစားမိသည်” ဆိုတဲ့ ဆရာ့ သဘောထားကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးရရင် ဆရာ့ အနေနဲ့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ မျက်နှာဖုံး ခေါင်းကြီး ကို အဓိပ္ပာယ် အကောက်လွဲနေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ခေါင်းကြီး “The Face of Buddhist Terror” ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အားလုံးကို သိမ်းကျုံး ထောက်ပြ ဆိုလိုတာ လုံးဝ မဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အကြမ်းဖက်မှု မျက်နှာစာတခုကိုသာ ဖွင့်ဟ ပြခြင်း ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်သာဖြစ်ပါတယ်။
“The Face of ‘something’” ဆိုတာဟာ အင်္ဂလိပ် အသုံး “usage” ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို “Cambridge Advanced Learner’s Dictionary” က “what you can see of something or what shows” အနေနဲ့ “para-phrase” ပြန်ခွဲ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ပါတယ်။ မြန်မာလို သင့်လျော်အောင် ပြန်ရင် “လူအများမြင်နိုင်တဲ့ (သို့မဟုတ်) ဖော်ပြထားသည့်” လို့ရပါတယ်။ ခေါင်းကြီးပါ “Buddhist” ဆိုတာကလည်း ဘာသာဝင် လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲ အထူးပြုနမ်စား အနေနဲ့ သုံးထားခြင်းသာဖြစ်ပြီး “ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့” လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း အဓိက မဏ္ဍိုင် ခေါင်းကြီးကို ခြုံပြီး အနက်ကောက်ရင် “ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အကြမ်းဖက်မှု မျက်နှာစာ တခု” လို့သာ ရပါတယ်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အားလုံးနဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ဘဲ ဘာသာအယူဝါဒနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ကျင့်ကြံ၊ ပြောဆို၊ ပြုမူ နေတဲ့၊ ရှေးယခင် ကမ္ဘာ့ အသိုင်းအဝန်းကလည်း လက်ခံနားလည်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒ သဘော၊ ခန္တီစ (Tolerance) သဘော နဲ့ သွေဖီဆန့်ကျင် ဖြစ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တချို့အကြောင်း၊ အခြား မျက်နှာစာ တခု ကို ဖွင့်ပြရေးထားတဲ့ “Cover Story” သတင်းခေါင်းကြီး ဆောင်းပါးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဘာသာတရား ရဲ့ ဓမ္မစစ်နဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တရပ်ကိုသာ ဆောင်းပါးက ညွှန်းဆိုကြောင်းနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ ပကတိ သဘော ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ဓမ္မနဲ့ ခွင့်လွှတ် သည်းခံနိုင်ခြင်း တရားတို့ကို မူရင်းဆောင်းပါးရှင်ဟာ ဆောင်းပါးရဲ့ နေရာ အနှံ့ အပြား မှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးပါ စာကြောင်း နှစ်ကြောင်းကို ဥပမာ အနေနဲ့ ထုတ်နှုတ်တင်ပြ ပါ့မယ် ခင်ဗျာ။
“Every religion can be twisted intoadestructive force poisoned by ideas that are antithetical to its foundations. Now it’s Buddhism’s turn. စာကြောင်းမှာဆိုရင် “နဂို ‘မူလ’ (ဝါ) ‘Thesis’ အခြေတည်ခဲ့တဲ့ ပကတိ သဘောထားတွေရဲ့ လုံးဝ ဥဿုံ ဆန့်ကျင်ဘက် ‘ပဋိမူလ’ (ဝါ) ‘Antithesis’ အတွေးအခေါ် တွေနဲ့ အဆိပ်ခတ်ခံရတဲ့ (အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့) အခါမှာ ဘာသာတရားတိုင်းဟာ ဖျက်စီးချေမှုန်းနိုင်စွမ်းအား တရပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အခု ဗုဒ္ဓဘာသာ အလှည့်ပါပဲ” ဆိုပြီး ဒီလို အကြမ်းဖက်မှု တွေဟာ မူလသဘောနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း နဲ့ ဘာသာတိုင်းမှာလည်း ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတယ်ဆိုတဲ့ သဘောကို သေသေချာချာ မူရင်းဆောင်းပါးရှင်က ထောက်ပြထားပါတယ်။
ဆောင်းပါး နိဂုံးမှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ အံ့သြချီးမွမ်းဖွယ် ခွင့်လွှတ်သည်းခံနိုင်မှုကို ဖော်ညွှန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက် တခုကို ရေးသားရာမှာ အောက်ပါ စာကြောင်း တခုနဲ့ အစပျိုးထားပါတယ်။ The Buddhist spirit of forgiveness, though, still exists in the unlikeliest of places.” “သို့သော်ငြားလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ခွင့်လွှတ်နိုင်မှု စိတ်ဓာတ်ဟာ လူတွေ မျှော်လင့်ထင်မှတ်မထားနိုင်တဲ့ နေရာအခြေအနေမျိုးတွေမှာ လက်ရှိအချိန်တိုင်အောင် ဆက်လက် တည်ရှိနေပါသေးတယ်” လို့ မူရင်းဆောင်းပါးရှင်က တိတိကျကျ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားထားပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဘာသာဝင် အများစုရဲ့ ကောင်းမြတ်မှု သဘောကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေရဲ့ အံ့သြချီးမွမ်းဖွယ် ခွင့်လွှတ်နိုင်မှု စွမ်းရည်ကို ဖော်ညွှန်းရာမှာ အကြမ်းဖမ်သမားတွေရဲ့ ဗုံးဒဏ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက် ခံစားခဲ့ရတဲ့ ထိုင်းလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဦးဇင်းလေးက “အကြမ်းဖက်သမား ဝါဒ” နဲ့ “အစ္စလာမ်အယူဝါဒ” ကို ခွဲမြင်နိုင်ပြီး တဘက်နဲ့ တဘက် အပြန်အလှန် အပြစ်တင်နေလို့ အကျိုးမရှိတဲ့ သဘောကို အာဃာတ မရှိ၊ ခွှင့်လွှတ်နိုင်မှု အပြည့်နဲ့ ပြောပြနိုင်မှု ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပုံဖော်ရင်း ဆောင်းပါး ကို နိဂုံးချုပ်ထားပါတယ်။
ဆိုတော့ မူရင်းဆောင်းပါးဟာ ဆရာ ခံစားရသလို “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အားလုံးကို ၀ါးလုံးရှည်နှင့် သိမ်းရမ်းခြင်း” မဟုတ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ အထက်မှာ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေက သက်သက်ပြုမယ်လို့ ယူဆပါတယ် ခင်ဗျာ။
နောက်တချက် ကျနော့် အတွက် ပိုစိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်၊ အကြီးမားဆုံး ပြက်လုံးတခု ကြားရသလို ခံစား ရတာကတော့ ဆရာ့ရဲ “အစိုးရက လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြားဘဲ အကြမ်းဖက်သူ မှန်သမျှ တားဆီး အရေးယူနေတာ၊ အထင်အရှား သတင်းထုတ်ပြန်နေတာကိုလည်း လစ်လျူရှုပြီး” ဆိုတဲ့ စာသား ပါပဲ ခင်ဗျာ။ အကြမ်းဖက်မှုတွေ တားဆီးသလား ဆိုတာ အရေးပေါ်ဥပဒေထုတ်ပြီး လက်ပိုက်ရပ်ကြည့်နေတဲ့ တာဝန်ရှိ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေက ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံ တွေ၊ ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေက သက်သေပါ ခင်ဗျာ။ ဒါ့အပြင် အကြမ်းဖက်မီးရှို့မှုတွေ မြို့တမြို့ မှာ မဖြစ်ခင် သွေးထိုးမှုစာတွေ စနစ်တကျ ဝေတာ၊ ဖြစ်ခါနီး နောက်ဆုံးအချိန်မှာ မီးဖြတ်၊ တယ်လီဖုန်းလိုင်းဖြတ်ပေးတာ စတဲ့ သံသယ ဖြစ်ဖွယ် အနေအထား တွေကို ကိုမင်းကိုနိုင်တောင် အဖွဲ့အစည်းတခုခုရဲ့ နောက်ကွယ်က စနစ်တကျ ကြိုးကိုင် ကြံစည်ထားမှု ပယောဂ ပါနေသလား ဆိုပြီး ထောက်ပြ မေးခွန်းထုတ်ဖူးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဆရာများ ဆက်စပ်တဲ့ သတင်းဖြစ်စဉ်၊ ဓာတ်ပုံ၊ ရုပ်သံတွေ မဖတ်ခဲ့၊ မသိခဲ့၊ မမြင်ခဲ့၊ မကြည့်ခဲ့ ရဘူးလား ခင်ဗျာ။
တရားဥပဒေ အရ အရေးယူ အပြစ်ပေးမှု ကို ကြည့်ပြန်ရင်လည်း တောင်ကုတ် အုပ်စုလိုက် လူသတ်မှုကြီးကစလို့ နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခ တွေ နဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ တရားခံတွေကို ဘယ်နှစ်ယောက်များ တရားဥပဒေ ရှေ့မှောက် အရောက်ပို့ စစ်ဆေး အရေးယူ၊ ထိုက်သင့် မျှတတဲ့ အပြစ်ပေးမှုမျိုး ပြုလုပ်ပေးပြီးပါပြီလဲ ဆိုတာ ဆရာ့ ကို မေးခွန်းထုတ်ချင်မိပါတယ်။
မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါးကလည်း တကယ်တော့ ဆရာ ဆောင်းပါးပါ “သွေးထွက်သံယို အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ အစိုးရရဲ့ အထိန်းအကွပ် မရှိဘဲ နိုင်ငံရဲ့ အခြားဒေသတွေကိုပါ ဆက်လက်ပျံ့နှံ့ ခဲ့ပါတယ်” အတိုင်းလည်း အပြည့်အဝ မဟုတ်ပါ ခင်ဗျာ။ မူရင်း စာကြောင်းက “The communal violence, which the government has done little to check, has since migrated to other parts of the country” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဘာသာပြန်ရင် “လူအုပ်စုအကြား ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု ပဋိပက္ခတွေဟာ အစိုးရရဲ့ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု အားနည်းခဲ့ခြင်းနဲ့အတူ (အဲဒီအချိန်ကစလို့) နိုင်ငံရဲ့ အခြားဒေသတွေကိုပါ ဆက်လက် ကူးစက် ခဲ့ပါတယ်” လို့သာ အဓိပ္ပာယ် ထွက်ပါတယ်။ “has done little to check” ဆိုတာ ဟာ “အထိန်းအကွပ် မရှိဘဲ” ဆိုတဲ့ သဘော လုံးဝ မသက်ရောက်ဘဲ “စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု လျော့ရဲ အားနည်းမှု” လို့သာ ဆိုလိုပါတယ်။
ဆိုတော့ ဆရာ ခင်ဗျာ။ အထက်မှာ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းပဲ ထပ်မေးချင်ပါတယ်။ ဆရာ ကိုယ်တိုင် အစဉ်အဆက်လေးစားလို့ အမြဲဖတ်ရှုနေရပါတယ်လို့ ဆောင်းပါးမှာ ဆရာ ဆိုထားတဲ့ မဂ္ဂဇင်းကြီး ပါ မူရင်းဆောင်းပါး အင်္ဂလိပ်လိုကို တကယ်မှ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့လား ခင်ဗျာ။ ကျနော်ရဲ့ ယခု ဆောင်းပါးပါ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေကို ဆရာ မနှစ်သက်၊ သဘောမတူပါက ဆရာ ဆန္ဒရှိရာ အင်္ဂလိပ်စာ ပါမောက္ခ တယောက်ယောက် ဆီမှာ စိတ်ကြိုက် စစ်ဆေးပါ ခင်ဗျာ။
ဆရာ့ လို လူထုအပေါ် သြဇာ သက်ရောက်မှု ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တယောက်က ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီးတော့တောင် မူရင်းဆောင်းပါး ရဲ့ အာဘော် သဘောထား အမှန်တချို့ မီဒီယာတွေရဲ့ ဘာသာပြန်မူတွေမှာ ပျောက်နေမှုကို ထောက်ပြ ကျနော်တို့ လူအများ၊ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာ ဖတ်နိုင်မှု အားနည်းတဲ့ လူအများ၊ မူရင်း ဆောင်းပါး ဖတ်ရှုဖို့ အခွင့်မသာတဲ့ လူအများ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့်ဖြစ် အောင် ရှင်းပြ၊ အကျိုးမဲ့ သွေးဆူ၊ ဒေါသထွက်၊ အမုန်းမပွားစေဖို့ လမ်းညွှန်မှု ပေးရမှာ မဟုတ်ပါသလား ခင်ဗျာ။
ဆရာ့ ဆောင်းပါး ကို အထက်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့သလို ဘာသာပြန်ကိုးကားမှု သဘော အပြင် တခြား ထောက်ပြ ပြန်လည် ဆွေးနွေးလိုတာကတော့ အချက်အလက် သဘောတွေ ပါ ခင်ဗျာ။
“သွေးအထပ်ထပ်စွန်းနေသော ၉/၁၁ ၏ တရားခံ အကြမ်းဖက်သမား ဘင်လာဒင်နှင့် ဘယ်အချက်တွေတူလို့ နှိုင်းယှဉ်ရတာလဲ” ဆိုတဲ့ ဆရာ့ ဆောင်းပါး ပါ စာသား ကို ပြန်လည်ထောက်ပြရရင် “ဘင်လာဒင်” လို့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း အပါအဝင် ဘယ်မီဒီယာ၊ အဖွဲ့အစည်း တခုခုကမှ အစပြု အမည်တပ် ညွှန်းဆိုခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဆောင်းပါးပါ ဆရာတော် ကိုယ်တိုင် “မြန်မာ ဘင်လာဒင် (သို့) ဗမာပြည်ရဲ့ ဘင်လာဒင်” လို့ ရိုက်တာ သတင်းဌာနနဲ့ အင်တာဗျူး တခုမှာ ဖွင့်ဆို ခံယူထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ သတိမပြုမိခဲ့ရင် သက်ဆိုင်ရာ သတင်းကို တွဲလျက် ရိုက်တာ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ပြန်လည်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ (“http://www.reuters.com/article/2013/04/08/us-myanmar-violence-specialreport-idUSBRE9370AP20130408”)
ဆိုတော့ ဆရာ့ အနေနဲ့ “ဘင်လာဒင် နဲ့ ဘာ့ကြောင့် ခိုင်းနှိုင်းညွှန်းဆိုရသလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးရှင်ကို မေးခွန်းထုတ်မယ့် အစား ကာယကံရှင် ကိုယ်တော် ကိုသာ မေးမြန်းလျှောက်ထားသင့်ပါတယ် လို့ ပြန်လည် ထောက်ပြ ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
နောက်တခုက “Hannah Beech က “စစ်သားတွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဟာ ဘာသာရေးနဲ့ စစ်တပ်ကို ရောထွေးလိုက်တာပါပဲ” လို့ ပုတ်ခတ်လိုက်ပြန်ပါသည်။” လို့ ဆရာ ဆောင်းပါးမှာ ဆိုထားခြင်းကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးထောက်ပြရရင် ဆရာထောက်ပြတဲ့ သဘောမှာ “Hannah Beech” က ပုတ်ခတ်ပြောဆိုထားခြင်းမျိုး လုံးဝ မဟုတ်ပါ။ ထိုင်းတောင်ပိုင်း ပဋိပက္ခ မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အကြောင်း စာအုပ်ရေး သူ “Youngstown State University, Ohio” က တွဲဘက်ပါမောက္ခ “Michael Jerryson” ရဲ့ အမြင်၊ အာဘော်ကို ကိုးကား ညွှန်းထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာရေး နဲ့ စစ်တပ် လက်ဆက်မှု သဘောကို ဗမာပြည်အပါအဝင် ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ဖြန့် ရှင်းပြ ဆွေးနွေးမှ လူအများ သဘောပေါက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဆောင်းပါး သပ်သပ် ရေးဖို့ ရှိပါတယ်။ “Michael Jerryson” ရဲ့ အထက်ပါ သဘောထား ဟာ ပုတ်ခတ်ခြင်း ဟုတ်/မဟုတ် အနည်းဆုံး သူရေး စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးမှသာ တစုံတယောက်က ပြန်လည် ဝေဖန် မှတ်ချက်ပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ တုံ့ပြန်ချင်ရင် သက်ဆိုင်ရာ စာအုပ်ကို အရင် ဖတ်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ ခင်ဗျာ။ ခု ကျွန်တော် ဒီမှာ ပြန်လည်ထောက်ပြလိုတဲ့ သဘော ကတော့ အထက်ပါ သဘောထားဟာ “Hannah Beech” ရဲ့ တမင်သက်သက် ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲမှု သဘောထား မဟုတ်ဘဲ ပညာရပ်သဘော အခြေအမြစ် ရှိရှိလေ့လာ၊ သုံးသပ်ထားတဲ့ ပညာရှင် စာရေးသူ တယောက်ရဲ့ အမြင်ကို ကိုးကားထားခြင်းသာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ့ရဲ့ “မျိုးစောင့်ဥပဒေ” အပေါ်သဘောထား၊ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးရှင် ဆရာတော် အပေါ် သဘောထား၊ ၀ိနည်းသိက္ခာ နဲ့ ညီ/မညီ စတာတွေကို ကျနော့် အနေနဲ့ ပြန်လည် ဆွေးနွေးစရာ မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် ဆရာတော်တချို့ရဲ့ တရားပွဲတွေက “အမုန်းတရား” ဟောကြားမှုတွေဟာ ဗမာပြည်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကျိုးသက်ရောက် တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမှ ပြန်လည် ငြင်းလို့ မရပါ။ “မန္တလေးက မွတ်ဆလင်တွေ နေစရာ၊ စားစရာ မရှိအောင် လုပ်မယ်” အပါအဝင် “အမုန်းတရားပွားနေတဲ့” တရားပွဲရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေက အထင်အရှား သက်သေပြုနေပါတယ်။
ဆိုတော့ ဆရာ ခင်ဗျား။ ဆရာ ဆောင်းပါးမှာ ဝေဖန်ထားသလို တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း က “မလျော်ကန်သော အသုံးအနှုန်းများဖြင့် စွပ်စွပ်စွဲစွဲ ရေးသားတင်ပြလိုက်ခြင်းကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်ရပါသည်” ဆိုတာဟာ အကျိုး/အကြောင်း ညီ၊ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန် (objectivity) ကျတယ်လို့ မဆိုနိုင်တော့ပါ ခင်ဗျာ။ ဆန္ဒစွဲအပါအဝင် အစွဲတွေနဲ့ ချေပထားတဲ့ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန် (subjectivity) သုံးသပ်မှု တခုလို့ပဲ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ယူဆ ရပါတော့မယ် ခင်ဗျာ။
ဆရာ့ အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အားလုံး ကိုယ်စား ဗုဒ္ဓ ဘာသာရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ တရားဓမ္မနဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့ ဂုဏ်ရည်ကို ကမ္ဘာမှာ ညစ်နွမ်းသွားမှာ စိုးရိမ်တာ နားလည်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး၊ ဘာသာ ဂုဏ်သရေ ညှိုးနွမ်းမှာ စိုးရိမ်လို့ အခု လက်လှမ်းမီသမျှ နိုင်ငံခြားသား အားလုံးကို တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါး ပို့ပြီး ဆောင်းပါးကို ဘယ်လိုနားလည်သလဲ နဲ့ သူတို့ အမြင်၊ သဘောထား မေးကြည့်နေပါတယ်။ အခုချိန်အထိ မေးပြီးသမျှ မိတ်ဆွေ နိုင်ငံခြားသား အားလုံးဟာ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရား၊ ဓမ္မလမ်းညွှန်မှုနဲ့ လုံးလုံး သွေဖီနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်တရပ်ကိုသာ ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုသဘော၊ မေတ္တာတရား နဲ့ ခန္တီစ ကြီးမှု သဘောကို ကောင်းကောင်းနားလည် သဘောပေါက် ပါတယ် ခင်ဗျာ။ တကမ္ဘာလုံးက အင်္ဂလိပ်စာလည်း တကယ်တတ်မယ်၊ ဆင်ခြင်တွေးခေါ်၊ စဉ်းစားနိုင်တဲ့ ဦးနှောက်လည်းရှိမယ်၊ တနည်းအားဖြင့် လူကောင်းစိတ်အနေအထား (မရူးတဲ့ သူ) လည်း ဖြစ်မယ် ဆိုရင် ဒီအတိုင်းပဲ တသဘောတည်း ရှိမယ်ဆိုတာ ကျနော့်အနေနဲ့ လုံးဝ ယုံကြည်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
နိဂုံးချုပ်ရရင် လူဆိုတာ အတ္တစွဲ၊ အုပ်စုစွဲ၊ လူမျိုး ဘာသာစွဲတွေ အနည်း၊ အများ ရှိတတ်ကြစမြဲမို့ ကျွန်တော်တို့ မမြင်နိုင်၊ ကွယ်နေတဲ့ ဗမာ့မျက်မှောက်ရေးရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ ပြဿနာ အရင်းခံ အခြေအနေတခုရဲ့ အတွင်းသဘောတွေကို နိုင်ငံတကာ အမြင်၊ တတိယ ကြားနေအုပ်စု သဘော၊ လွတ်လပ်တဲ့ စာနယ်ဇင်းတခုရဲ့ ထောက်ပြချက် အနေနဲ့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းက ဖော်ထုတ်ရေးသားထားခြင်းကို လက်မခံနိုင်ရင်တောင် အလေးအနက် ထည့်သွင်းစဉ်းစား အရေးတယူ ရှိရပါမယ်။ လုံးဝ အသိအမှတ်မပြု ဥပေက္ခာပြု နေခြင်း၊ ပစ်ပစ်ခါခါ ပြန်လည် ဝေဖန်ခြင်း၊ မဟုတ်ဘူး ဆိုကာ အတွင်တွင် “ဘူး” ခံငြင်းခြင်း စတဲ့ အပြုအမူ၊ သဘောထားတွေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် စစ်အစိုးရတွေ ကျင့်သုံးလာခဲ့ပြီး ဘာတခုမှ အကျိုးရလဒ် မရှိ၊ ကမ္ဘာကလည်း မယုံ၊ ပြည်တွင်း ပြဿနာလည်း အမှန်တကယ် မရှင်းနိုင်ခဲ့တာ သမိုင်းသက်သေ ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။ အစွဲကင်းတဲ့ ရင်ဘတ် နှလုံးသား စိတ်၊ ကျယ်ပြန့်တဲ့ သဘောထား၊ မှန်ကန်တဲ့ အလုပ်တွေနဲ့သာ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းမှသာ မိမိလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ စွဲကပ်နေတဲ့ “အမုန်းတရား” နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ရောဂါစုံ နဲ့ ရေသောက်မြစ် “ဇစ်မြစ်” အားလုံး ကို အလုံးစုံ အောင်မြင် ပြီးမြောက် အေးချမ်း နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ကျနော့်အမြင်၊ အာဘော် ကို ဧရာဝတီကနေတဆင့် ပြန်လည် ဆွေးနွေးတင်ပြလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted by Penang Myanmar Muslim Youth Helping Association at 6/26/2013 06:44:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာရေး ဖိနိုပ်မှု မရှိကြောင်း နိ...
Penang Myanmar Muslim Youth Helping Association